1903 Thu 23 Jun 2016 LESSONS from INSIGHT-NET-Hi Tech Radio Free Animation Clipart Online A1 (Awakened One) Tipiṭaka Research & Practice University in Visual Format (FOA1TRPUVF)Celebrating 60 years of Dhamma Service Diamond Jubilee of MAHA BODHI SOCIETY, BENGALURU Inauguration of BODHI RASHMI PAGODA in Classical English,Myanmar(Burmese)-Classical မြန်မာ (ဗမာ)
1903 Thu 23 Jun 2016
in Classical English,Myanmar(Burmese)-Classical မြန်မာ (ဗမာ)
Insight-ကွန်ရက်အခမဲ့အွန်လိုင်း A1 (တစ်ခုမှာနိုး) Tipiṭakaသုတေသန & Practice တက္ကသိုလ်မှ
အခမဲ့အွန်လိုင်းအီလက်ထရောနစ် Visual ဆက်သွယ်ရေးသင်တန်းအပေါ်
14, Kalidasa Raod, Gandhinagar, ဂါ 560009 အိန္ဒိယ
ဓမ္မဝန်ဆောင်မှု၏နှစ်ပေါင်း 60 ကိုဂုဏ်ပြုသော
မဟာဗောဓိ SOCIETY, ဂါ၏စိန်ရတု
ဗောဓိ RASHMI စေတီတော်
မဟာဗောဓိ SOCIETY, ဂါ
အာနန္ဒာ Bhante ရဲ့ photo ။
ဗောဓိ Rasmi စေတီတော် 2016-4: 27 မိနစ်
ဇွန် 14, 2016 အပေါ် Published
အသစ်ဘာဝနာစေတီတော်ဗောဓိ RASMI POGADA ၏လာမည့်သမ္မတကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲများအတွက်ပြင်ဆင်မှုအပြည့်အဝလွှဲဖြစ်ပျက်နေသည်။
အဆိုပါစေတီတော်မဟာဗောဓိ Dhammaduta ဝိဟာရ Narasipura, ဂါမှာတနင်္ဂနွေ 26 ဇွန်လ 2016 ခုနှစ် 10 မှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။
Bhagavan ဗုဒ္ဓနှင့်ရဟန္တာ Bhantes နှင့်သန့်ရှင်းသောဘုရား Tipitaka
၏သန့်ရှင်းသောရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၏ enshrinement ၏လှပသောဗီဒီယိုမျှဝေ။ ဒီပရိုဂရမ်အများစုဟာဆရာတော်၏ 95 မွေးဖွားခြင်းရာပြည့်အခမ်းအနား၏အခါသမယအပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ Acharya Buddharakkhita Bada Bhanteji မတ်လ 2016 ခုနှစ်မှာတရားပွဲတော်ကာလအတွင်း။
ကျနော်တို့နေကြတဲ့ 26 ဇွန်လ 2016 ခုနှစ်ပေါ်မှာဤသမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများဖိတ်ခေါ်ပါ။
မဟာဗောဓိ Dhammaduta ဝိဟာရ Narasipura ကျေးရွာ, ဂါမြောက်မှာ
သန့်ရှင်းသောဘုရား Umbrella ရဲ့နိုးထနှင့်
တနင်္ဂနွေ, 26 ဇွန် 2016 တွင်
မဟာဗောဓိ Dhammaduta ဝိဟာရ
ကျေးရွာ: Narasipura Matthahalli P.O
Alur လမ်း, Dasanapura Hobli,
ဂါမြောက်ကိုရီးယား -562123, အိန္ဒိယ
ရက်သတ္တပတ်ကြာ Patthana ဓမ္မသီချင်း
18-25 ဇွန်လ 2016
8:30 pm တွင်
သန့်ရှင်းသောဘုရား Umbrella နှင့်စိန်ဘတ်၏နိုးထ
အ Budhi Rasmi စေတီတော်ရဲ့ထိပ်ပေါ်
ဆရာတော်။ ဆရာတော် Nandhobhasalankara, Ubhatovibhangadhara
Ven.Sayadaw ရွှေ Nant Thar Thitala, Dvipitakadhara
ဆရာတော်။ ဆရာတော် Obhasabhivamsa, Pathamakyaw Tha-Sa-A Dhammacariya
ဆရာတော်။ ဆရာတော် Vepullalankara, Dvipitakadhara Paliparagu
ဆရာတော်။ ဆရာတော် Nyanadhaj, Paliparagu
ဆရာတော်။ ဆရာတော် Maghinda, Vinayadhara
ဆရာတော်။ SayadawNyanadhaja, Dhammacariya
10:00 pm တွင်
11:00 pm တွင်
ဗောဓိ RASMI စေတီတော်နှင့်ဗောဓိ PRAKARA
Ven.Achan Dtun (Thiracitto), ထိုင်း
မဟာဗောဓိ Society ကဂါ၏အောက်ပါဘုန်းကြီးများ
ဆရာနဲ့လမ်းညွှန်, မဟာဗောဓိဘုန်းတော်ကြီးသင် Institution များ, ဂါ (MMI)
Ven.Bhikkhu Janinda, အရှင်ဘုရား, MMI
Ven.Bhikkhu Ariyawamsa, အရှင်ဘုရား, MMI
Ven.Bhikkhu Vijaya, အရှင်ဘုရား, MMI
Ven.Bhikkhu Pamokkha, အရှင်ဘုရား, MMI
Ven.Bhikkhu Panyarakkhita, ဥက္ကဋ္ဌ, မဟာဗောဓိ Arunachal ဘဏ်ခွဲ
Ven.Bhikkhu Panyaloka, ဒါရိုက်တာ, မဟာဗောဓိ Namsai ဌာနခွဲ
Ven.Bhikkhu Dhammaloka, ဒါရိုက်တာ, မဟာဗောဓိ Mysore ဌာနခွဲ
Ven.Bhikkhu Sangharakkhita, ဘဏ္ဍာရေးမှူး, MBS
Ven.Bhikkhu Buddhadatta, ကျောင်းအုပ်ကြီး, မဟာဗောဓိဘုန်းတော်ကြီးသင် Institute မှ
Ven.Bhikkhu Vishudananda, ဒါရိုက်တာ, မဟာဗောဓိ Chichingehera ဌာနခွဲ
Ven.Bhikkhu Nyanarakkhita, ဒါရိုက်တာ, မဟာဗောဓိ Suknachari ဘဏ်ခွဲ,
Ven.Bhikkhu Buddhapala, ဒါရိုက်တာ, မဟာဗောဓိဟိုက်ဒရာဘတ်နျဌာနခှဲ
Ven.Bhikkhu Nyanapala, လက်ထောက်။ ဒါရိုက်တာ, မဟာဗောဓိ Tawang ဌာနခွဲ
Ven.Bhikkhu Assaji, ဒါရိုက်တာ, မဟာဗောဓိ Deomali ဌာနခွဲ
Ven.Bhikkhu Sanghadatta, ကြီးကြပ်ရေးမှူး, MMI
Ven.Bhikkhu Sunanda, အရှင်ဘုရား, MMI
Ven.Bhikkhu Dhammadipa, အရှင်ဘုရား, MMI
Ven.Bhikkhu Dhammajyoti, အရှင်ဘုရား, MMI
Ven.Bhikkhu Sanghavansa, အရှင်ဘုရား, MMI
Ven.Bhikkhu Ratthapala, အရှင်ဘုရား, MMI
Ven.Bhikkhu Dhammankur, မဟာဗောဓိကျောင်း, Chichingehera
Ven.Sayale Yasanandi, ကျောင်းအုပ်ကြီး, မဟာဗောဓိ Gotami Nunnery, Bordumsa
Ven.Sayale Uttamanyani, အရှင်ဘုရား, MMI
Ven.Bhikkhu Tejapanyo, နယူး Zeland
Ms.Marianne Finger, ဆွစ်ဇာလန်
der Maur, ဆွစ်ဇာလန် auf Mr.Alex
Mr.Kurt Nyaya Haverkamp,​​ ဆွစ်ဇာလန်
Ms.Michtild Saddha Jecker, ဆွစ်ဇာလန်
Ms.Gaby Schweizer, ဆွစ်ဇာလန်
Ms.Helen Von Flue, ဆွစ်ဇာလန်
Ms.Barbara Thaddey, ဆွစ်ဇာလန်
အလှမယ် Suwaree Jenjirawantana ထိုင်းနိုင်ငံ,
အလှမယ်နရာ Pipatcharoenkij ထိုင်းနိုင်ငံ,
Mrs.Duangchai Phasomsup ထိုင်းနိုင်ငံ,
အလှမယ် Atcharin Vitheethum ထိုင်းနိုင်ငံ,
မစ္စတာဝေမင်း Htet, မြန်မာ
ဗောဓိ Rasmi Pagada ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့
Ven.Bhikkhu အာနန္ဒာ, Gen.Secretary, MBS
Ven.Bhikkhu Sangharakkhita, Dhammaduta ဝိဟာရ, ဂါ
အနုပညာရှင် & ဒီဇိုင်း: Dr.C.Chandrasekhara
ဗိသုကာ: Shri Madhav Rohidekar
ဆောက်လုပ်ရေး: Shri A.Rajanna
စေတီတော်အင်ဂျင်နီယာချုပ်နှင့် Builder: မစ္စတာညွန့်ဝင်း, မြန်မာ
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များနှင့် Bada Bhante ရုပ်ထု: Pushparaj M က
ကျောက်ခေတ်အလုပ်လုပ်: M က Jagannath
ပန်းပု: Krishnappa, Mysore
ဗောဓိ Prakara ဒီဇိုင်း: Ishara နှင့် Partner သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ
အကြံဉာဏ်: ဆရာတော်။ ရဟန်း Subodhi, Mahameswanava ကျောင်းတိုက်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ
တရားအားထုတ်, တရားထိုင်နည်းစနစ်များစွာ, အချို့ကွဲလွဲ
သငျသညျထိုင်၏ကွဲပြားခြားနားသောအလေ့အကျင့်များပင်လယ် navigate ကူညီပေးပါမည်
သယံဇာတများ။ အကယ်. မထောင်ပေါင်းများစွာ - - အမျိုးအစားများရာပေါင်းများစွာစာသားရှိပါတယ်
သင်တို့သည်လည်းပိုပြီးတက်ကြွတဲ့ဘာဝနာနည်းစနစ်များအတွက်, ငါ့လမ်းလျှောက်ဘာဝနာလမ်းညွှန်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ သငျသညျပြီးသားတရားအားထုတ်ရန်နှင့်အတူအချို့သောအတှေ့အကွုံရှိပါကသို့မဟုတ်,
အဆိုပါ “အကောင်းဆုံး” ဘာဝနာသင်အသက်တာ၌ဤအဆင့်မှာသင့်အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သောဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ခုအမျိုးအစား: အာရုံစူးစိုက်အာရုံနှင့်ပွင့်လင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း။ ကျွန်တော် …. လုပ်ချင်ပါသည်
မြေတပြင်လုံးတရားအားထုတ် session တစ်ခုအတွင်းမှာတစ်ခုတည်းအရာဝတ္ထုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု။
ဒီအရာဝတ္ထုထွက်သက်တစ်ဂါထာ, visualization, အများ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ
ကိုယ်ခန္ဓာပြင်ပအရာဝတ္ထု, စတာတွေအ Practitioner တိုးတက်လာဖို့ကသူ့စွမ်းရည်နှင့်အမျှ
ခေါင်းစဉ်: Samatha (ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထိုင်), Zazen အချို့ကိုပုံစံများ, မတ်ေတာကရုဏာ
ကို attachment ။ အားလုံးသညာ, သူတို့ကိုပြည်တွင်းရေး (အကြံအစည်, ခံစားခကျြကိုမဖြစ်,
မှတ်ဉာဏ်, etc) သို့မဟုတ်ပြင်ပ (အသံ, အနံ့, etc), အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်မြင်ကြသည်
သူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသည်။ ဒါဟာ၏ Non-reactive စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏ဖြစ်စဉ်သည်
ဥပမာ: စိတ်ကိုဘာဝနာ, ဝိပဿနာအဖြစ်အချို့သောအမျိုးအစားများ
ဒါပေမယ့်ကိုယ်တိုင်ကအပေါ်ကျိန်းဝပ်တက် - ဆိတ်ငြိမ်အချည်းနှီးသော, တည်ငြိမ်နှင့်လူကန်လန်။ ကြှနျုပျတို့ … လုပျနိုငျပါတယျ
လည်း “Choiceless သိရှိရေး” သို့မဟုတ် “သန့်စင်သောတမန်တော်က” ခေါ်ပါ။ သင်ဤပြည်နယ်၏စကားမပြောတတ်ရှာတွေ့ဆိုင်သောအရာကိုဆင်ခြင်ကိုးကားအများစုဟာ။
စောင့်ကြည့်မှု, စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ပဲနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, အင်အားစိုက်ထုတ်နိုင်အောင်
နောက်ကွယ်မှနှင့်သည်အတိုင်း, Practitioner ၏စစ်မှန်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာရှိကျန်ရစ်၏
မူလအစ & ဓိပ်ပာယျ
Zazen (坐禅) နည်းလမ်းများ
ဂျပန်၌, ဒါမှမဟုတ် “ထိုင်တရားအားထုတ်” “ဇင်ထိုင်” ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အမြစ်များရှိပါတယ်
အိန္ဒိယဘုန်းတော်ကြီးပြန် tracing တရုတ်ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ (Ch’an) အစဉ်အလာ,
Bodhidharma (6 ရာစု) ။ အနောက်နိုင်ငံတွေ၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံးပုံစံများကိုလာခုနှစ်တွင်
Dogen Zenji (~ 1253 1200), ဂျပန်၌ Soto ဇင်လှုပ်ရှားမှု၏တည်ထောင်သူမှ။
ဗမာတွင်ပုံစံတူ Model များကိုဂျပန်နှင့်ကိုရီးယားမှာ, ဇင်၏ Rinzai ကျောင်းမှာကျင့်သုံးကြသည်။
ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ဖြတ်ကျော်ခြေထောက်နှင့်အတူတစ်ဖျာနှင့်ခေါငျးအုံးကျော်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ အစဉ်အလာကြောင့်ကြာပန်းသို့မဟုတ်ဝက်ကြာအနေအထားတွင်ပြုလေ၏, ဒါပေမဲ့ဒီခဲလိုအပ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်အများဆုံးယောဂီဤကဲ့သို့သောထိုင်:
တရားအားထုတ်အမျိုးအစားများ - Zazen ကိုယ်ဟန်အနေအထား
တရားအားထုတ်အမျိုးအစားများ - zazen ကုလားထိုင်
ဇင်တောင်တန်းကျောင်းတိုက်၏ Images ကိုယဉ်ကျေး
အရေးအပါဆုံးရှုထောင့်, သငျသညျပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း, နောက်ကျောကိုစောင့်ရှောက်သည်
အထွင်ထားတဲထံမှလည်ပင်းမှ, လုံးဝဖြောင့်။ ပါးစပ်အနီးကပ်စောင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်
စိတ်ကို။ သင်ဓါတ်ငွေ့ကိုရှူရှိုက်မိတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန် 10 နဲ့စတင်ပြီး, တအရေအတွက်ကိုရေတွက်နှင့်
ထို့နောက်စတာတွေ, 9, 8,7နောက်ပြန်သင်သည် 1 မှာရောက်လာတဲ့အခါ, သငျသညျပြန်လည်စတင်ရွေ့လျား
နောက်တဖန် 10 ကနေ။ သငျသညျအာရုံပြံ့လှငျ့ရနှင့်သင်၏ရေတွက်ဆုံးရှုံးလျှင်, ညင်ညင်သာသာဆောင်ကြဉ်း
10 မှအာရုံစူးစိုက်မှုကို back နှင့်ထိုအရပ်မှပြန်လည်စတင်။
Shikantaza ( “ပဲ
) “ထိုင်လျက် - ဤပုံစံအတွက် Practitioner ဆိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်မသုံးပါဘူး
ဘာဝနာ၏အရာဝတ္ထု; အစား, ယောဂီတတ်နိုင်သမျှဆက်လက်တည်ရှိ
ခိုင်ခံ့သောရပ်ရွာထောက်ခံမှုနှင့်အတူစင်တာများ (သံဃာ့) ။
မှောက်ရက်, ရိုးရာဓလေ့နည်းနည်း, ရွတ်လျက်, အုပ်စုဖတ်ကြား
ဗုဒ္ဓသှနျသငျ။ အချို့လူများကအခြားသူများကိုမ, ဒီကိုကြိုက်လိမ့်မယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ
3 နှစ်ကြာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအုပ်စု zazen ကျင့်သုံး, ငါသူတို့အားတွေ့ရှိ
တရားအားထုတ်အမျိုးအစားများ - ဝိပဿနာ
“ထိုးထွင်းသိမြင်မှု” သို့မဟုတ် “ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တတ်သော” ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအစဉ်အလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ကျော6ရာစုဘီစီမှတွဲအလေ့အကျင့်။ ဝိပဿနာ-ဘာဝနာ, သှနျသငျအဖြစ်
နှင့်အက်စ် N. Goenka နှင့်ဝိပဿနာလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ခေတ်စားလာခဲ့သည်။
ဝိပဿနာ-တရားအားထုတ်ခြင်း၏ကျော်ကြားမှု, ၏ “သတိသမ္မှ
အသက်ရှူခြင်း “သတိ” အဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာနောက်ထပ်လူကြိုက်များရရှိထားသူ “။
စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်နှင့် “access ကိုအောင်မြင်ရန်ပထမဦးဆုံးအဆင့်အတွက်သက်တော်,
အာရုံစူးစိုက်မှု။ “ဒီကပိုအာရုံစိုက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဘာဝနာကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ထိုအခါ
အလေ့အကျင့်ကိုကိုယ်ထင်ရှားပေါ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ “ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု” ရန်ပေါ်လှုံ့ဆျော
မည်သည့်ဖက်တွယ်။ ဤတွင်အရင်ကဆိုရင်များအတွက်ရည်ရွယ်တစ်ဦးနိဒါန်း, တတ်၏။ သို့
ဆရာမ (ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဆုတ်အတွက်) ။ ]
ပထမဦးဆုံးအသှငျအပွငျ samatha အလေ့အကျင့်အားဖြင့်, အာရုံစူးစိုက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အသက်ရှူအသိပညာအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို, ယခုအချိန်တွင်မှယခုအချိန်တွင်မှ, သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအပေါ်
အာရုံပေါ်လာဖို့ဆက်လက်: အသံ, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခံစားချက်တွေကို, စိတ်ခံစားမှု,
အသိပညာ, ပြီးတော့အသက်ရှူများ၏အာရုံကိုပြန်သွားပါ။ အာရုံ
ဤအစဉ်, အာရုံစူးစိုက်မှု၏အရာဝတ္ထုကို (အသက်ရှူ) တွင်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်
အခြားအကြံအစည်သို့မဟုတ်အာရုံရိုးရိုး “နောက်ခံဆူညံသံ” အဖြစ်ရှိပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်) ကို “မူလတန်းအရာဝတ္ထု” ဟုခေါ်သည်။ ထိုအခါ “အလယ်တန်းအရာဝတ္ထု”
သညာသင်တို့၏လယ်ပြင်၌ပျေါပေါကျလာကြောင်းအရာအားလုံးထက်ဖြစ်ပါသည် - တစ်ခုခုကို
(စသည်တို့ကိုအသံ, အနံ့, ကိုယ်ခန္ဓာ၌ယားယံ,) သင့်ငါးအာရုံမှတဆင့်သို့မဟုတ်
စိတ်ကို (အတွေး, မှတ်ဉာဏ်, ခံစားချက်, etc) မှတဆင့်။ တစ်အလယ်တန်းအရာဝတ္ထု အကယ်.
သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို hooks နှင့်ကွာခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့, သို့မဟုတ်ပါကအလိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်စေသည်သို့မဟုတ်လျှင်
ယခုအချိန်တွင်သို့မဟုတ်နှစ်ခု, “စဉ်းစား” နဲ့တူနေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ချက်နှင့်အတူက labeling,
“မှတ်ဉာဏ်”, “ကြားနာ”, “လို” ။ ဒီအလေ့အကျင့်ကိုမကြာခဏဟုခေါ်သည်
တစ်ဦးကစိတ်ရောဂါမှတ်စုတွင်ယေဘုယျအားဖြင့် object တစ်ခုသတ်မှတ်သော်လည်းမ
အသေးစိတ်။ သငျသညျအသံသတိထားနေရတဲ့အခါ, ဥပမာ, “ကြားနာက” တံဆိပ်ကပ်
အစား “မော်တော်ဆိုင်ကယ်,” “အသံ” သို့မဟုတ် “ဟောင်ခွေး၏။ ” တစ်ဦးမနှစ်မြို့ဖွယ် အကယ်.
အလွင်ပင်အရသာအစား “ဒူးနာကျင်မှု” သို့မဟုတ် “ငါ့၏” နာကျင်မှု “သို့မဟုတ်” ခံစားချက် “ကိုသတိပြုပါ, ပေါ်ထွန်း
အရာဝတ္ထု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ချက်တစ်ဦးအတွက် “အနံ့” ဟုပြောလာသောအခါတစ်ဦးအမွှေးအကြိုင်များ၏သတိပြုမိ,
ဤသို့ရရှိခဲ့ “access ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု”, အာရုံထို့နောက်မှလှည့်သည်
(annica), insatisfactoriness (dukkha) နှင့်မိမိကိုယ်ကို၏အနတ္တ (annata):
ဖြစ်ရပ်သုံးခု “ဖြစ်တည်မှု၏အမှတ်အသားများ” က pervaded ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်ဥပေက္ခာသမ္, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အတွင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည်ဤသွင်းအားစုနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဝိပဿနာအမျိုးအစားများ (Anh-Minh Do ထံမှအဖြေကိုဖတ်)
ဝိပဿနာ Dhura (အရမ်း In-depth ဆောင်းပါး)
အရင်ကဆိုရင်အဘို့ဝိပဿနာ (Goenka စတိုင်)
ရိုးရိုးအင်္ဂလိပ်သတိ (အခမဲ့ eBook)
အဲဒီအကြောင်းစာအုပ်တွေ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်3~ 10 ရက်ဆုတ်ခွာ (လှူဒါန်းမှုကိုအခြေခံပြီး) ။ အဆိုပါ
အလေ့အကျင့်, အထူးသဖြင့်ဝိပဿနာ, ဒါပေမယ့်လည်းကနေအားကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခြင်း
(ထိုကဲ့သို့သော Thich nhat Hanh ကနေဗီယက်နမ်ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာကဲ့သို့) အခြားနွယ်။ “စိတျ” ဗုဒ္ဓဘာသာသက်တမ်း sati များအတွက်ဘုံအနောက်ပိုင်းဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Anapanasati,
ထိုကဲ့သို့သော zazen အဖြစ်အလေ့အကျင့်, (အရင်းအမြစ်: ဝီကီပီးဒီးယား) ။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာစိတ်ကိုများအတွက်အဓိကသြဇာတစ်ခုမှာဆရာယောဟနျ Kabat-Zinn ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့စိတ်-အခြေခံပြီးစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်
(MBSR) - သူမက်ဆာချူးဆက်တက္ကသိုလ်မှ 1979 ခုနှစ်တွင်တီထွင်သော
Medical School ကျောင်းတွင် - အများအပြားဆေးရုံနှင့်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့
ယခုအချိန်တွင်, လက်ခံနှင့် Non-တရားစီရင်ခြင်းမှသတိထားရမှာ
အာရုံ, အတွေး, ထကစိတ်ခံစားမှု။
အလေ့အကျင့် “အချိန်နှင့်အတူ, ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ်ဖုံပေါ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကုလားထိုင်ပေါ်မှာထိုင်
သင့်ရဲ့အသက်ရှု။ သငျသညျအသက်ရှုအတွက်, သင်၌အသက်ရှုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်တဲ့အခါ, နှင့်
ဘယ်လိုခံစားရ၏။ အခါသင်အသက်ရှုထဲက, သငျသညျအထဲကအသက်ရှုကြသည်သတိထားပါ။ လုပ်ပါ
အတွေ့အကြုံ, ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ, အပေါ်သွားအရာကိုသတိပြုမိဖြစ်
ဖြစ်ပျက်, ညင်ညင်သာသာသင်အာရုံခဲ့ကြကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်, နှင့်ဆောင်ခဲ့ကြ
ထင်သို့မဟုတ်အလွင်ပင်အရသာ။ ထိုအတွေး /
သင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်မွေ့လျော်ဖို့သင်ယူပါ။ သင်ပြုသောကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကိုခံစားရပုံကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့တန်ဖိုးထားတယ်။
, အစာစားခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း, ပြောနေတာ။ “နေ့စဉ်ဘဝကို” တရားအားထုတ်ဘို့, အလေ့အကျင့်
“အလိုအလျှောက် mode ကို” တွင်နေထိုင်သောနှင့်မ - ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသတိပြုမိ။ အကယ်. သင်
သင်၏ခြေ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေပိုပြီးသတိထားဖ​​ြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ကြောင်း, လမ်းလျှောက်
စသည်တို့ကိုမြေပြင်, သငျသညျကွားလြှငျနေသောအသံ, ထိ
ထိုင်ခုံအလေ့အကျင့်၌သင်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသင့်နေ့စဉ်ဘဝအလေ့အကျင့်များနှင့် Vice-အပြန်အလှန်ထောက်ခံပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးအညီအမျှအရေးကြီးလှသည်။
ကျောင်းများနှင့် Hos မှာသှနျသငျ
အဖြစ်ဝေးကျနော်သတိပြုမိပါ၏အဖြစ် pitals ။ အဆိုပါ
ကြီးမားသောမှာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဒီနေ့ခေတ်ကျင့်သုံးအဖြစ် “သတိသမ္လှုပ်ရှားမှု” ဖြစ်ပါတယ်
ထိုအလေ့အကျင့်လိုက်ပါသွား။ ထိုကြောင့်ကြီးမြတ်ဖြစ်ပါသည် - ကသင်၏အသက်တာမှကောင်းတဲ့အရာအများကြီးသက်ရောက်စေမည်။
သငျသညျ။ ဤအရပ်မှသင်တို့ထို့နောက်ဝိပဿနာ, Zazen, သို့မဟုတ်အခြားအမျိုးအစားများသို့ရွှေ့နိုင်
ကြင်နာမှု, စေတနာ, ကောင်းသောအလိုတော်ကိုဆိုလိုသည်တဲ့ပါဠိစကားလုံး။ ဤ
နှင့်တိဘက်နွယ်။ “သနားကြင်နာခြင်းတရားအားထုတ်” ဟုခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ပါသည်
မိမိကိုယ်ကိုဆီသို့ဦးတည်ပိုပြီးညျမတ်ေတာသဘောထားကို; တိုးမြှင့် Self-လက်ခံမှု;
အသက်တာ၌ရည်ရွယ်ချက် (ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားပို့စ်တွင်ပိုမိုဖတျရှု) ။
ကြင်နာမှုနှင့်စေတနာသူ၏စိတျနှလုံးခံစားချက်တွေကို။ အားဖြင့် Start
တစ်ဦး “ကြားနေ” လူတစ်ဦး
ဖွံ့ဖြိုးခံရဖို့ feeling ပျြောရှငျမှုလိုနှင့်အဘို့အကောင်းဖြစ်ခြင်း၏ဖြစ်ပါသည်
သောနေပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, “အလက်နက်နွေးထွေးသောနှလုံးခံစားမှု” ကျလာသော
များများသင်ဤတရားထိုင်, သင်ခံစားရလိမ့်မည်ပိုပြီးဝမ်းမြောက်သောစိတ်လေ့ကျင့်။ ဒါက Mathieu ရစ်ချတ်ရဲ့ပျြောရှငျမှု၏လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
unarisen နေမကောင်းအလိုတော်ပျေါပေါကျမပျေါထှနျးနေမကောင်းအလိုတော်စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်။ “- ဗုဒ္ဓ
ဤဆောင်းပါး၌, အမ်မာSeppälä, Ph.D Loving-ကြင်နာမှုတရားအားထုတ်ခြင်း၏ 18 သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြအကျိုးခံစားခွင့်စူးစမ်း။
ဒါဟာကြိုးနဲ့ Self-ဗဟိုပြုလူတို့အဘို့နှစ်ခုလုံးအကျိုးရှိသည် ဖြစ်. ,
ဒါဟာမကြာခဏအိပ်မပျော်, အိပ်မက်ဆိုး, ဒါမှမဟုတ်အမျက်ဒေါသကိစ္စများမှဖွဆေးအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာများကလည်းအကြံပြုသည်။
paricāraṇā - စောင့်ရှောက်မှု, အာရုံစူးစိုက်မှုကို, ပြီးနောက်ရှာဖွေနေ; အပျော်အပါး, ပွဲ, စိတ်ကျေနပ်မှု
- Society ကဘုရားကျောင်း
ကန်နာဒါ Script အတွက်ဘန်ဂလိုသို့မဟုတ် Bengalore (ဖောင့်)
အသျှင် Acharaya Buddharakkhita မဟာမထေရ်
အိန္ဒိယနှင့်အတူအသျှင် Acharya Buddharakkhita အားဖြင့် 1956
အဆိုပါမဟာဗောဓိ Society ကဗိမာနျတျော, ဘန်ဂလို
rendering အတွက်စေ့စပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့အသျှင်
Acharya Buddharakkhita ၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုအောက်, Society
အဆိုပါမဟာဗောဓိ Society က 2006
ထိုမဟာဗောဓိ Society ကဘန်ဂလိုရဲ့သမိုင်း
21-05-2010 ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့မဟာဗောဓိ Society
၏နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေခန္ဓာကိုယ်အစည်းအဝေး၏အခါသမယအပေါ် Bada Bhante သြှ
Acharya Buddharakkhita ၏မိန့်ခွန်း
းလိုက်ပါတယ် 1891. အတွက်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏အသျှင် Anagarika Dhammapala
ကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူသခင်ဗုဒ္ဓ၏ဘဝနှင့်ဆက်စပ်သည်သန့်ရှင်းသောအရပ်တို့ကိုကိုးကွယ်ရန်တစ်ဦးဘုရားဖူးအဖြစ်အိန္ဒိယသွားရောက်ပြီးတာနဲ့။ သူဗုဒ္ဓဂါယာသွားရောက်တဲ့အခါမှာအဲဒီမှာကျိုးပဲ့သောရုပ်တုဆင်းတု
မှလွဲ. ရှိဘာမျှမကြီးနှင့်ဧကရာဇ် Ashoka
ကတည်ဆောက်ဗိမာန်တော်ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့နှင့်ကျိုးပဲ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောတပါးသောဘုရားအဘို့အ Devalaya သို့လှည့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Mahant တရားမဝင်ကြောင့်သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်တောတွင်းဘယ်သူမှဂရုစိုက်နှင့်အတူအရပျကိုဖုံးလွှမ်းခဲ့ချိန် မှစ. ခဲ့သည်။ သူကမှန်မှန်နဲ့စနစ်တကျသီရိလင်္ကာ,
အသျှင် Dhammapala သခင်ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံရိပ်တွေ၏ desecration
ကန့်ကွက်ကတည်းကသူဆိုးဆိုးရွားရွားဖျားနာ-ဆကျဆံ Mahant ၏ goondas
သူကဗုဒ္ဓဘာသာမှဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဒ်များပွနျလညျထူထောငျမှတဆင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်လည်ရှင်သန်ချင်တယ်။ သူဟာစသည်တို့ကိုဆာ Ashutosh Mukharjee တူဘင်္ဂလား, ဆာ Manmatha Banerjee,
Shri Shyama Prasad Mukherjee,
1893. အတွက်ချီကာဂိုအတွက်ကမ္ဘာ့ဘာသာတရား၏ပါလီမန်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကနေလုလင်တို့သည်ဆောင်ခဲ့ကြ၏သူတို့နှင့်ဘုန်းကြီးများ
လုပ်. အမျိုးမျိုးသောသန့်ရှင်းသောအရပ်ထဲမှာဘုရားဖူးစင်တာများကို run
ဖို့သူတို့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြား။ အသျှင် Anagarika Dhammapala ၏စေတနာစိတ်အားကြီးခြင်းနှင့်အတူပစ်ခတ်ဤရွေ့ကားငယ်ရွယ်သံဃာတော်များ, ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ကြီးထွားနှင့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်လမ်းအတွက်အိန္ဒိယအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်၏ပြည်မှပြန်လည်ရှင်သန်မှုအကြောင်းကိုရောက်စေနိုင်အောင်ဒါပေမဲ့သူတို့,
1946 အတွက်မဟာဗောဓိ Society
အ pancasila ကိုယူ။ ငါအများစုဟာအသျှင်
Candamani Mahathera အောက်မှာ Kusinara
မှာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးဖွစျလာတဲ့အခါနောက်ပိုင်းမှာ 1949 ခုနှစ်, ငါသည်
Saranath, ကတ္တားနှင့်ငါအများစုဟာ Ven.Nyanatiloka Mahathera
Pativisodhaka အဖြစ် Tipitaka
Jagadish Kashyap လို၏ဖိတ်ကြားချက်အရငါအဘိဓမ္မာသင်ပေးဖို့ Nalanda ပါဠိ
Post ကိုဘွဲ့လွန် Institute မှဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ တကယ်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဘာသာရှိပါတယ်မဟုတ်လျှင်ဒီတော့ဒီအသင်းအဖွဲ့များကိုငါ့သိသိသာသာသင်ခန်းစာအဆုံးမဩဝါဒပေးအိန္ဒိယတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ပြန်လည်ရှင်သန်မှုသည်ဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတာဝန်,
တချို့ကရဟန်းတို့အချို့သောတက္ကသိုလ်များအတွက်အိန္ဒိယဒဿန၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားမှုများဗုဒ္ဓဘာသာ၏ပြန်လည်ရှင်သန်မှုရဲ့အမှတ်ကနေ Non-တန်ဖိုးရှိရှိနေကြ၏။ သူတို့ကအလှကုန်ပစ္စည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်အပေါ်ယံနှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့ခဲ့ကြသည်။
Nalanda Post ကိုဘွဲ့လွန်ဌာန Institute မှနုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
2500 ဗုဒ္ဓ Jayanti ၏အခါသမယတွင်, တှေးတောဆငျခွ Buddhag​​aya သွား.
တဦးတည်းအပြည့်အဝလတသိန်း deepa မဖေါ်လိုပူဇော်ကြ၏။ ငါအနာဂတ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကိုရတယ်။ ဒါက
Mrs.Bianca Moonasinghe သြှ Anagarika Dharmapala ၏တူမ,
encroached ခဲ့ကြောင်းနှင့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်သော Mysore, etc ငါမဟာဗောဓိ
သမ္မတသကဲ့သို့ငါ seva နှင့် sadhana
သူမသည်မင်္ဂလာရှိ၏ထက်ပိုပြီးကြီးကငါ5ကြိမ်မြောက်ဇွန်လ 1956 အပေါ်ဘန်ဂလိုဆီသို့ရောက် လာ. , ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖယ်ရှားခြင်း, တစ်ဦးဝင်းထရံကိုချပြီးခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့, မြေမြေသြဇာဖြစ်စေ
Ragi စိုက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးနှစ်အနည်းငယ်ကထို site နှင့်အဆောက်အဦအလုပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ခဲ့သည်။
ဘန်ဂလိုရဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက 54 ကြိမ်မြောက်နှစ်ဖြစ်၏,
brevity ကို ထောက်. 54 နှစ်ကြာ6Navakas ကိုးနှစ်ပေါင်းကာလကိုခွဲခြားကြပြီ။
ပထမဦးဆုံး Navaka (1956-1965) ခုနှစ်တွင်လှုပ်ရှားမှုများမတူညီနှင့်ပင်ရောင်စုံရှိကြ၏။ ဆိုက်ရောက်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ် လာ. ငါ့ကို Deccan Herald သတင်းစာများ၏မိတ္တူကိုပေးတော်မူ၏။ အဆိုပါလူကြီးလူကောင်းငါသိသည်အဘယ်သူကိုတစ် Mr.Basu ခဲ့သည်။ အဆိုပါစက္ကူအစားအနက်ရောင်စကားကိုဒီမှာစတာတွေ,
ဗုဒ္ဓဘာသာသို့လူ converting ၏တစ်ဦးတည်းသောအရာဝတ္ထုနှင့်အတူ,
သူတို့သတင်းကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ချင်တယ်ကပြောသည်ငါ့ကိုခြယ်သခဲ့ တစ်ဦးဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိသည်။ ငါစိန်ခေါ်မှုလက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ပစ္စုပ္ပန်ဗောဓိပင်အနီးအခြေအတင်ဆွေးနွေး။ အဆုံးမှာအားလုံးသူတို့ဘာတွေဖတ်မမှန်သောကြီးတို့သည်ငါ့ကိုနှောက်ယှက်ဘို့တောင်းပန်ပါတယ်ကွယုံကြည်တယ်ရှိကြ၏။
ဤသူအနည်းငယ်ပညာတတ်နဲ့အတူငါဝက်နာရီတရားထိုင်နှင့်အတူတနင်္ဂနွေသုတျအစီအစဉ်နှင့်ဓမ္မသွန်သင်ချက်တွေကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့မှတဆင့်အခြားသူများကိုအများကြီးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနှင့်အစီအစဉ် ထိုအချိန်မှစ. ဆက်လက်သိရသည်။ ဗစ်တိုးရီးယားဆေးရုံလာရောက်လည်ပတ်တစ်နေ့မှာငါဆရာဝန်ကိုစောင့်ဆိုင်းကင်ဆာလူနာတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ကိုမြင်တော်မူ၏။ သူတို့ကနာကျင်မှုရှိကြ၏။ ဒါနဲ့တစ် seva အစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်ဆေးရုံဒါနဝန်ဆောင်မှုကခေါ်လေ၏။
အနီးအနားမှာအလက္ကားအသီးဈေးကွက်ရှိ၏။ လူအပုံပုံရှိ Coorg လိမ္မော်သီးနှင့်ငှက်ပျောသီးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုငါစျေးနှုန်းမေးတဲ့အခါဘုန်းတော်ကြီးသကဲ့သို့ငါအရမ်းလိုအပ်နေဘာကြောင့်သူကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ငါခံစားနေရပြီးနေသောလူနာအားဆေးရုံအတွက် Dana ပေးချင်သောသူကိုကပြောသည်။ ဒါကဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် ok ဟုဆိုသည်နှင့် Coorg လိမ္မော်သီးနှင့်ငှက်ပျောသီးပေး၏နှင့်မဆိုပိုက်ဆံမယူခဲ့ပါဘူး။ သူကလည်းသိပ်ပိုက်ဆံမယူခဲ့ပါဘူးသူတစ်ဦး coolie အဘို့အစီစဉ်ခဲ့သည်။ ငါဝိတိုရိယဆေးရုံသို့သွားသောအခါအကြီးဆရာဝန်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအသီးကိုသီးကိုဆောင်ခဲ့ခဲ့ဟုမေးသူ့ကိုငါရည်ရွယ်ချက်ကိုကပြောသည်နှင့်သူ
3-4 ရပ်ကွက်မှဖြန့်ဖြူးဘို့စီစဉ်ခဲ့သည်။ အသီးအပွဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ကျနော်တို့လူနာသခင်ဗုဒ္ဓ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အတူအလျင်အမြန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစေလိုကြောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဆရာဝန်ကိုလည်းနောက်လာမည့်န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေကတိပြုခဲ့သည်။
sadhana အစီအစဉ်၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤသည်အခြားဝန်ဆောင်မှုများအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုယူပုံဖွစျသညျ။ အခုတော့ဆေးရုံ Dana ဝန်ဆောင်မှုအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာကနေ့တိုင်းထို့နောက်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာ 15 ရကျကာလ၌ဖြစ်လျှင်, တစ်ချိန်ကလဖြစ်လာပြီး။
medico-လူမှုရေး-ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းများစီစဉ်။ ကျနော်တို့လူနာနှင့်အမှုထမ်းဖတ်ဘို့ဆေးရုံများအတွက်စောင့်စေခြင်းငှာစာအုပ်တွေစုဆောင်း။ တစျနေ့ကနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူကို
လာ. ထိုသူအပို Tempo ခဲ့သူကျွန်တော်တို့ကို jhatkas
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာဥပမာအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နိုင်ပါသည်။ Mr.Nijalingappa သူန်ကြီးချုပ်ခဲ့စဉ်အနီးကပ်ကိုးကွယ်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သူနေမကောင်းဖြစ်သကဲ့သို့သူဆေးရုံ၌ရှိ၏။ သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးရုံ Dana ဝန်ဆောင်မှုကိုမြင်ကြသောကြောင့်ကျနော်တို့ဆေးရုံမှာသူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာအချို့လုပ်ငန်းရှင်ကသူ့စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လိုင်စင်ရတဲ့အဘို့ကားနှငျ့အတူသူ့ကိုလာဘ်ထိုးဖို့လိုခငျြပုံရသည်။ သူသည်စင်ကြယ်သောလက်နိုင်ငံရေးသမား, သူရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့စေလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလူကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ကြောက်လန့်, ထိုလူကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့အမေးခဲ့တယ်။ Mr.Nijalingappa
ဒါကပထမလေး Wheeler MBS ဆီသို့ရောက် လာ. , ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။
1960-62 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအစာခေါင်းပါးသောအခါ, သုံးနှစ်အဘို့မိုဃ်းမရွာရှိ၏။ အိန္ဒိယနှင့်အမေရိကန်အစိုးရများသဘောတူညီချက်တခုသို့ဝငျခဲ့အစာခေါင်းပါးသောဒေသများတွင်ခံရသော်လည်းလူတို့အဘို့
PL480 အစားအစာအကူအညီအစီအစဉ်ကိုခေါ်။ အခုတော့ကြီးမားသော burgler ဂျုံပမာဏ, ရေနံ, etc ဘန်ဂလိုရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့သာသနာပြုများအားပေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကဒီအရာရဲ့အားသာချက်ကို ယူ. ဘန်ဂလိုပတ်ပတ်လည်ကလူဆင်းရဲအများကြီးပြောင်းလဲ။ တစ်နေ့မှာတစ် Rama Reddy ကျွန်တော်တို့ငါဝိတိုရိယဆေးရုံတွင်လူနာအဖြစ်ရှုမြင်တော်မူသော, လာ၏။ သူကစာသားကသူ့ရွာကိုလုံးဝခန်းခြောက်အကြံပေးအဖွဲ့နှင့်လူများပင်မြက်ပင်သည်မျိုးစေ့ကိုအစာစားခြင်းကစတင်ခဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲခံရဖို့သွားဟုဆိုအော်ဟစ်ကြ၏။
မဟာဗောဓိအချို့သော seva အစီအစဉ်ကိုတက်ယူနိုင်လျှင်သူကမေး၏။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဗစ်တိုးရီးယားသွားဆရာဝန်များနှင့်အတူဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးအလွန်မကြာမီကျွန်တော်တစ်ဦးကျေးလက်ဒေသဆေးဘက်
seva အစီအစဉ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Sakalavara
PL480 အစားအစာပစ္စည်းပစ္စယဖြန့်ဖြူးဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ အစာခေါင်းပါးသောအခါယုတ်လျော့လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုပြီးစီးသောအခါထိုဒေသကနေဆုတ်ခွာစဉ်းစားမိပါတယ်။ သို့သော်လူဦးဆေးဝါးကုသမှုနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုဆပ်ဖို့,
Sakalavara, နေဖို့မဟာဗောဓိမေတ္တာရပ်ခံနှင့်မြေယာ၏ 13 ဧက ပေး.
ကျနော်တို့မဟာဗောဓိကျေးလက်ဒေသ Medical Center မှစတင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ကြံစည်ခံရခဲ့သည့်အတိုင်း Mr.Birla ပိုက်ဆံပေးရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကစီမံကိန်းကိုအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အဆောက်အဦးများအတွက် Rs.75000 လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကငါတို့ထက်ပိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုတစ်သိန်းကိုပေးတော်မူ၏။ Sakalavara
20 အလွန်ခံရသော်လည်းမိသားစု 20 အိမ်ဆောက်နေတဲ့ထောက်ပံ့ငွေကိုပေးတော်မူ၏။ အစိုးရကလည်းလမ်းများအတွက်ရန်ပုံငွေများကိုပေး၏။ Sakalavara
စီမံကိန်းကိုအပြည့်အဝပုံသဏ္ဌာန်ကိုယူသောအခါ, အိန္ဒိယအစိုးရ NIMHANS
မှတဆင့်ပုံသို့ကြွလာကြပြီးပစ္စုပ္ပန်45 မှကျေးရွာများကနေ, 45
ကျေးရွာများမှန်ဆောင်မှုကိုချဲ့ထွင်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ 1 st Navaka မဟာဗောဓိ Society ကအစီအစဉ်များ၏အဆုံးအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကျယ်ပြန့်။ ပိုက်ဆံကလူတို့သညျ လာ. အမှုအရာဖြစ်ပျက်, လာ၏။
2 nd Navaka ထဲမှာအကြှနျုပျတို့အပူလောင်လူနာအပေါ်အာရုံ၏စဉ်းစားမိတယ်။ Karnataka ပြည်နယ်မရှိအပူလောင်ဆေးရုံရှိခဲ့သည်။ အပူလောင်လူနာဝိတိုရိယဆေးရုံ၏ varanda အတွက်ထားကြပြီးဘာမှမသူတို့ကိုသေဆုံးစေ မှလွဲ. ပြုသောအမှုနိုင်။ ဒါဟာ saddening ခွအေနအေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်မဟာဗောဓိတစ်ဘန်းဆေးရုံစီမံကိန်းရာထူးတိုး။ ကျနော်တို့စက်မှုမတော်တဆမှုသားကောင်များမှအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာ 200 beded ဆေးရုံဖြစ်လာခဲ့သည် 50 ကုတင်နဲ့စတင်။ ဒါဟာမဟာဗောဓိ Burn နှင့် Casualty စင်တာအမည်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာဒီအစီအစဉ်အပေါ်ထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်
Hassan, Tumkur, Mysore, Mandya အတွက်, အဖြစ်အများအပြားခရိုင်ဆေးရုံ,
Chikmagalur အစိုးရဆေးရုံတွေအတွက် Burn ရဲ့ရပ်ကွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့စိတ်ကျေနပ်စရာဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မီးလောင်ရဲ့အလုပ်များစွာသောလူအဘို့အကွောကျစရာကောငျးတစျခုဖွစျသောကွောငျ့မဟာဗောဓိလည်းအများအပြား
run နှင့် Multi-စည်းကမ်း-ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူစုစုပေါင်းကနျြးမာရေး၏
ကျနော်တို့ကော်ပိုရေးရှင်းကချဉ်းကပ်နှင့် Lalbagh နောက်ကွယ်မှ 99 နှစ်ငှားရမ်းခြင်းအပေါ်မြေယာတယ်။ ကျနော်တို့
Arogya ဖောင်ဒေးရှင်း, အိန္ဒိယ,
ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခြားအဖွဲ့အစည်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ငါတို့သည်လည်း2nd နှင့်3ကြိမ်မြောက် Navaka ကာလအတွင်းမှာ 15
အခုတော့အခွင့်အလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာပေး seva အစီအစဉ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်မဟာဗောဓိလူနေအိမ်စာသင်ကျောင်းနှင့်ဘော်ဒါဆောင်အစီအစဉ်အဘိဓါန် Ladakhi ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့က
Ladakh facing ခဲ့ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုအစားအစာ,
ကြီးမားတဲ့ပြဿနာရင်ဆိုင်နေရခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာကက်ရှမီးယားတွင်နေထိုင်ကြသည်ရှိရာသာဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပညာရေးအစီအစဉ်အခြားအလွန်အရေးကြီးသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့အတွေ့အကြုံ Mysore အတွက်ကျောင်းဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ။ 2
၏အဆုံးကြိမ်မြောက် Navaka နှင့်3ကြိမ်မြောက် Navaka
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးသူ Mr.Srirangaraj, အစိုးရဝန်ဆောင်မှုကနေအငြိမ်းစားယူခဲ့ပါတယ်။ မိမိအအကူအညီဖြင့်ငါတို့သည်တက္ကသိုလ်နီးစပ်, Saraswathipuram အတွက်မြေကွက်တစ်ကွက်ရရှိခဲ့သည်။ Srirangaraj
အသျှင်အာနန္ဒာဥရောပဖို့နဲ့ငါတို့ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်. ဖော်ပြခဲ့တဲ့သည်မိမိဓမ္မဆွေးနွေးပွဲကာလအတွင်းသွားလေ၏။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘန်ဂလိုနှင့် Mysore စင်တာများအတွက်နှစ်ဦးစလုံးကျောင်းသားများအတွက်အကူအညီအများကြီးရတယ်။ Mysore အလယ်ဗဟိုလည်းတက်ကြွစွာလူမှုဖူလုံရေးအလယ်ဗဟိုဖြစ်လာသည်။ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများကျောင်းတွင်ကျောင်းထွက်စတာတွေပုံမှန်တနင်္ဂနွေပို့ချချက်နှင့်မဟာဗောဓိလည်းပန်းမာန်ဌာနကိုဘယ်မှာပညာမတတ်လူငယ်၏အကူအညီနှင့်အတူပန်းမာန်သင်တန်းများသို့ပွေးလေ၏အခြားလူမှုဖူလုံရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူစတာတွေပုံမှန်ဆေးရုံ
Dana ဝန်ဆောင်မှုနှင့် pinjarapole တိရိစ္ဆာန်များနို့တိုက်ကျွေးမှု,
တူကောက်ယူခဲ့ကြလေ့ကျင့်ရေးပေးခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်း Sakalavara ဖို့ဒီအစီအစဉ်တိုးချဲ့။
3 ကြိမ်မြောက် Navaka 1974-83 ၏အစအဦးမှာ, ကျနော်တို့ကနျြးမာရေးပညာကျောသတ်မှတ်ထားရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဆရာဝန်များနှလုံးပြဿနာရောဂါ။ ဒါကြောင့်စိတ်အားသန်သောလှုပ်ရှားမှုများပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ လှုပ်ရှားမှုများချောချောမွေ့မွေ့သွားစဉ်တွင်, ငါတို့ထုတ်ဝေဌာနခွဲဖွဲ့စည်းနှင့်အလွန်မကြာခဏစာအုပ်တွေထုတ်လုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။3ကြိမ်မြောက်၏အဆုံးအားဖြင့်စာအုပ်တွေ navaka ကြီးများအရေအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
4 ကြိမ်မြောက် Navaka စဉ်အတွင်းကျနော်ဂျပန်နှင့်အမေရိကန်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ငါကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်ဘန်ဂလိုအကြားလွန်းလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီမှာအမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုတက်ယူခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကတရားအားထုတ်အလယ်ဗဟိုနဲ့ Big ထမ်းရွက်၌တည်ခဲ့ Buddhayoga တှေးတောဆငျခွစင်တာဟုခေါ်တွင်။
1984 ခုနှစ်တွင်4ကြိမ်မြောက် Navaka စဉ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ Bangalore မှာမဟာဗောဓိ Vishwa Maitri ပုထိုးတော်ကြီးကိုတည်လေ၏။ ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာငြင်းဆန်ကံအကြောင်းပြချက်များအတွက်သောကာလအတွင်း 1000 နှစ်ကြာအိန္ဒိယတည်ဆောက်ပထမဦးဆုံးစေတီတော်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ စသည်တို့ကိုမဟာယာန,
Tantrayana, Vajrayana တူဗုဒ္ဓဘာသာကိုအလွန်များဂိုဏ်း, ထ လာ.
ဗုဒ္ဓဘာသာအသိုင်းအဝိုင်းကတက်ကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်အားနည်းခဲ့ပါတယ်။ မူလသွန်သင်ချက်တွေကိုသီရိလင်္ကာ, မြန်မာနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်စောင့်မတော်မူခဲ့သည်။ သို့သော်အိန္ဒိယအတွက်မူရင်းသှနျသငျ၏အဘယ်သူမျှမသဲလွန်စနီးပါး 1000 အနှစ်ကတည်းကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Tipitaka, ဘာသာပြန်ဆိုနှင့် print ထုတ်ဖို့ Tipitaka Granthamala
စီမံကိန်းချီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ 13 volumes ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အခုဆိုရင်အဲဒီစာအုပ်တွေပုံနှိပ်ထဲကဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုကြှနျုပျတို့ afresh ထုတ်ဝေရန်မှ re-editing ကြသည်။ နောက်ထပ် volumes ကိုလည်းဘာသာပြန်ထားသောလိမ့်မည်။
1986 ခုနှစ်တွင်မဟာဗောဓိ Society ကပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွင်နောက်ထပ်တခြေလှမ်းတက်ယူလေ၏။ ဤသူကားငါ၏ကျောင်းသား Ven.Sanghasena အောက်မှာ Ladakh အတွက်မဟာဗောဓိ Society ၏ဘဏ်ခွဲတည်ထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အမေရိကန် Ven.Sanghasena ၌ငါ့မရှိခြင်းကာလအတွင်း dedicatedly လူ့အဖွဲ့အစည်းပြေးခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကကျနော်တို့ကလူဘာမျှမသိထားပြီးသောအကြောင်းကိုမူရင်းသှနျသငျ၏အက
leh အတွက်အလယ်ဗဟိုရှိမဟုတ်လျှင် Ladakh,
သူတို့ကတိဘက် system ကိုနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ Open-စိတ်ဖြစ်ခြင်း, Ladakhi ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာကောက်ယူဆိုင်သောအရာကိုဆင်ခြင်ဆုတ်ခွာပါဝင်ခဲ့။ အဆိုပါအစီအစဉ်များ Ladakh သွားရောက်သူကိုနိုင်ငံခြားသားများအားတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
Ven.Sanghasena အမဟာဗောဓိလူ့အဖွဲ့အစည်း, ဘန်ဂလိုကိုယ်စားအဘိဓါန် Ladakhi လူတစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဝန်ဆောင်မှု rendering ဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်းသူတို့အချို့မျက်စိကွယ်ပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်အဖြစ်သူတို့ကိုထောကျပံ့ဖို့ဘယ်သူမှခဲ့သောသူတို့အဘို့ဟောင်း-အသက်အရွယ်အိမ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။
မလေးရှား, စင်္ကာပူ, တူအမျိုးမျိုးသောအာရှနိုင်ငံများသို့သူ့ကို ယူ.
သူအကူအညီတွေအများကြီးရနိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်ဦးကကိုရီးယားသီလရှင်မဟာဗောဓိကရုဏာကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံလို့ခေါ်တဲ့တစ်ခုလုံးကိုဆေးရုံလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထိုင်ဝမ်အဖှဲ့အစညျး fo Kuang ရှမ်းလည်းသိသိသာသာလမ်းအတွက်ကူညီပေးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အချို့မြန်မာ Mahatheras လာ. သူ့ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အခုသူတစ်ဦးတန်ဖိုးရှိရှိအလယ်ဗဟိုပြေးသည်။ ကျနော်တို့ကြိုးစားသူ Ladakh
fo Kuang ရှမ်းတက္ကသိုလ်ကနေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မဟာယာန၏သူတို့ရဲ့
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ 1991-92 အတွက် Navaka ကြိမ်မြောက် 4
အလွန်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို5ကြိမ်မြောက် Navaka တွေအများကြီးစဉ်အတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ စိတျနှလုံးပြဿနာပြီးနောက်ကျနော်တို့မဟာဗောဓိရလောက
Shanti ဗုဒ္ဓဝိဟာရအဖြစ် Buddhag​​aya ရဲ့ style
အတွက်သခင်ဗုဒ္ဓတစ်ဦးဗိမာနျတျောတညျဆောကျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို 1994 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးခဲ့ပါတယ်နှင့်အလုပ်အရမ်းမြန်သွားလေ၏။ အဆိုပါမဟာဗောဓိ Society ကတစ်ဧရာဗုဒ္ဓဗိမာနျ, အိန္ဒိယ၏မြေတပြင်လုံးတွင်၎င်း၏မျိုးတယောက်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ မဟာဗောဓိနိုင်ငံခြားအစ္စလာမ္မစ်ကျူးကျော်များနှင့်အခြားဒေသခံဘာသာရေးဝါသနာရှင်များအားဖြင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျိုးပဲ့ပျက်စီးခဲ့သည့်ဧကရာဇ်အသုဘဘာဝနာအားဖြင့်တည်ဆောက်
Buddhag​​aya ဗိမာနျတျော၏ဘုန်းအသရေရှည်ချင်တယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလား-ငြိမ်းချမ်းရေးဆုဗုဒ္ဓဗိမာနျတျောမဟာဗောဓိမျိုးစုံလှုပ်ရှားမှုများ၏အချက်အချာဖြစ်လာသည်။ နံနက်5အစီအစဉ်များကိုညဥ့်အခါမှီတိုငျအောငျမဖေါ်လိုနှင့်တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်အတူစတင်နံနက် မှစ. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း။ လူအတော်များများဟာတနင်္ဂနွေအပေါ်တရားအားထုတ်ရန်နှင့်ဟောပြောချက်များအဘို့နှင့်အမျိုးမျိုးသောအခမ်းအနားများနှင့်ပွဲတော်များရောက်လာပြီ။
1995 ခုနှစ်တွင်ဆွေးနွေးပွဲများ, အစည်းအဝေးများကို, အတန်းနှင့် pabbajja
အဆိုပါ Sevakshetra သည်လည်းငါတို့လှုပ်ရှားမှုများပိုမိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ခံမှုရောက်စေဖို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
0Due ကျနော်တို့အမေရိကန်နှင့်ဘန်ဂလိုအကြားမကြာခဏလွန်းခဲ့ရတယ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများမှ။ ယခုနှစ် 2000 ခုနှစ်တွင်ရှိသမျှတို့ကိုငါဘို့တစ်ချိန်ကအိန္ဒိယကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဘန်ဂလိုနှင့် Mysore တက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ဂလိုအတွက်လေ့လာနေသူအပေါင်းတို့သည်
Lay ကျောင်းသားများမဟာဗောဓိ Carla
2001 အတွက်မဟာဗောဓိဘုန်းတော်ကြီးသင် Institute
မှစတငျဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အတန်းစည်းရုံးခဲ့ကြနှင့်စာသားစာအုပ်တွေထုတ်လုပ်ကြပြီ။ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှု task ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာဆရာ, ဆရာမအဖြစ်ကျောင်းသားများကလေ့ကငျြ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမဟာဗောဓိ
ဘုန်းကြီးများထားရှိရန်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တစျခုထက်ပိုအရေးကြီးသောအစီအစဉ် Dikkha နှင့် Sikkha နှင့်အတူ pabbajja ရာ၌ခန့်အစီအစဉ်ခဲ့သည်။ မဟာဗောဓိလည်းအားလုံးအိန္ဒိယကျော်ကနေအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများသည်အရာခုနစ်ပါး 3-လ Dhammaduta သင်တန်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပတ်သက်. ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ မဟာဗောဓိ
Arunachal Pradesh ပြည်နယ်အတွက် Diyun အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Diyun
လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှုကိုပင်မပရိုဂရမ်ခဲ့သည်။ မဟာဗောဓိ Dhammavijaya ဗုဒ္ဓဝိဟာရနှင့်မဟာဗောဓိ Maitri ပုထိုးတော်ကြီးယခုနှစ်အတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်သည့်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းအဟောင်းအသက်အရွယ်အိမ်နှင့်ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်လာမယ့်ရှိရာ
Deomali အတွက်အခြားဌာနခှဲကစတင်ပါပြီ။ တလက်တလက် Chi ချင်းပြည်နယ် Chera မှာ Tripura စတင်ခဲ့သည်။ ဤသူအပေါင်းတို့လှုပ်ရှားမှုများ၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အသျှင်ကဿပမထေရ်မြတ်သောအလုပ်လုပ်နေတယ်။
အသျှင် Panyaloka Namsai အတွက်မဟာဗောဓိကောလိပ်၏စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ၏ရုံး၏တာဝန်ခံယူမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ Diyun စင်တာမှစလှေတျတျောသိရသည်။ သူကတစ်ဦးထံမှ
Diyun မှာရုံးနှင့်အတူ Z ကိုစေခြင်းငှါ, မဟာဗောဓိ Society
ကဘန်ဂလိုကိုယ်စားပေါ်မှာဤစင်တာကိုစုစည်းပြီးနှင့်တည်ထောင်ရန်ရှိပါတယ်။ သူကပရောဂျက်၏တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ယခုထို့နောက်အစီရင်ခံစာများပေးပို့သည့်စောင့်ရှောက်မည်။
6 ကြိမ်မြောက် Navaka
ဆွစ်ဇာလန်, ပြင်သစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်စပိန်အတွက် Ven.Ananda
ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးသည် USA Center ကလည်း Coarsegold မှာကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတက်ရောက်လေပြီ။ မဟာဗောဓိရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့သို၏ဖိတ်ကြားချက်အရဓမ္မဆုံးမဩဝါဒပေးအစီအစဉ်အပေါ်ဥရောပနှစ်ခုဘုန်းကြီးများသြှ
Sangharakkhita နှင့်အသျှင် Panyarakkhita ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇလန်၏
Ms.Monica Thaddey Diyun နှင့် Tawang
ကျောင်းသားများမူလစာမျက်နှာတည်ထောင်ရန်သူမ၏အစ်မ Carla ၏နာမ၌အလွန် sumptuous
လှူဒါန်းမှုပေးတော်မူပြီ အသက်အရွယ်အိမ်မှာ။ အခုတော့သူမနှင့်သူမ၏သူငယ်ချင်းများကဘန်ဂလိုနှင့် Kathina Civara ဒါနအတွက်
Pavarana အခမ်းအနား၏အခါသမယနှင့်မဟာဗောဓိ Dhammavijaya
ဗုဒ္ဓဝိဟာရနှင့်အောက်တိုဘာလ 2010 ခုနှစ် Diyun မှာမဟာဗောဓိ Maitri
Jayanti ကြိမ်မြောက် 2550
ဟိန်ဗားရှင်းလည်းမကြာမီစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဗဟိုအစိုးရဆောက်လုပ်ရေးထံမှအကူအညီကိုအကယ်ဒမီအစီအစဉ်များအတွက်ပေါ်သွားအတူ။ ဒီပါဠိနှင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို၏သခင်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၏အဖြစ်အဆင့်မြှင့်လိမ့်မည်။
ဖောင်ဒေးရှင်း Alur မှာကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဝိညာဉ်ရေးပညာရေးမဟာဗောဓိ Dhammaduta စင်တာဘို့ထားကြ၏သိရသည်။ မြေယာ၏ 3,75 ဧက Dhammadutas များအတွက်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာ, Dhammacaris
တင်. လိမ့်မည်သည့် Upasaka Chaitanya အိန်္ဒိယ (Raghunath)
နောက်ဆုံးထို့အပြင်အတူတူတစ်ခုလုံးကိုရှေ့ဝင်းထရံကို Upasaka Rajanna
Dhammavijaya Mahadvara ဖြစ်ပါတယ်။
Society ကဘန်ဂလိုအကိုင်းအခက်များတိုးမြှင့်အရေအတွက်ကို run နိုင်မှ,
နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ် Programs ကို:
5,30 a.m. မှာနံနက်ဓမ္မသီချင်းနှင့်တှေးတောဆငျခွ
6 p.m. ညနေတွင်ဓမ္မသီချင်းနှင့်တှေးတောဆငျခွ
9,30 a.m. မှာတိုင်းတနင်္ဂနွေဓမ္မဟောပြောချက် & တှေးတောဆငျခွအစီအစဉ်
မေလအပြည့်အဝလနေ့၌ဗုဒ္ဓ Jayanti ပွဲနေ့များ
(Anagarika Dhammapala ၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ) ဇွန်လလပြည့်နေ့နေ့တွင် Ven.Dhammapala နေ့
ဇူလိုင်လအပြည့်အဝလနေ့၌ Dhammacakka Pavattana နေ့
အောက်တိုဘာလလပြည့်နေ့၌ Pavarana နေ့
Lay လူများ၏နေအိမ်များမှာ Merit
Society ကသီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင် Anagarika Dharmapala
နှင့်ဗြိတိသျှသတင်းစာဆရာနှင့်ကဗျာဆရာဆာ Edwin Arnold
ဘို့ ရှိ. , ဗုဒ္ဓဂါယာ, Sarnath နှင့် Kushinara
မှာရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာကွန်း restore ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာ” အဖြစ် Self-ခွဲခြားသတ်မှတ်ဘူး။ အဆိုပါမဟာဗောဓိ Society ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားသက်တမ်းတိုးကို၎င်း,
အဖြစ် Dalit ဗုဒ္ဓဘာသာလှုပ်ရှားမှုသည်အခိုင်ခိုင်လုံလုံတင်သော။
Kalidas Marg, ဂန္ဒီနဂါး, ဘန်ဂလို, Karnataka 560009
မဟာဗောဓိ Center Dhammaduta ဝိဟာရဆုတ်ခွာ
quotes, ရုပ်ပုံများ, ပျော်ရွှင်မှု, ကိုယ်ကျင့်တရား, စိုးရိမ်, ဗုဒ္ဓ, စေ့ဆော် quotes, လှုံ့ဆျောမှု Thoughts နှင့်ရုပ်ပုံများ
ဗီဒီယိုများ http://sarvajan.ambedkar.org ပေါ်မှာအသက်ရှင်
ဇန်နဝါရီလ 2008 ခုနှစ်
အလန်အားဖြင့် Music ကိုရွတ် Nichiren ဗုဒ္ဓဘာသာ - 2:29 မိနစ်
Einstien နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ 1:29 မိနစ်
ဗုဒ္ဓဘာသာ -Ratna သုတ်-Discourse- 7:37 မိနစ်
ဗုဒ္ဓဘာသာပါဠိရွတ်ဆို Mangala သုတ် - 3:57 မိနစ်
နောင်တ -Buddhism ၏သီချင်း - 4:30 မိနစ်
သမ်မတနိုငျငံနေ့ Parade- 5: 55mins
4:15 မိနစ် - က -Enya ဖြစ်နိုင်ပါစေ
Celebrating 60 years of Dhamma Service Diamond Jubilee of MAHA BODHI SOCIETY, BENGALURU Inauguration of BODHI RASHMI PAGODA in Classical English,Sinhala
1902 Wed 22 Jun 2016
in Classical English,Sinhala
1902 බදාදා 22 ජුනි 2016
Insight-NET- නිදහස් මාර්ගගත A1 (අවදි එක්) Tipiṭaka පර්යේෂණ සහ පුහුණුව පිළිබඳ විශ්ව
නිදහස් මාර්ගගත ඉලෙක්ට්රොනික විෂුවල් සන්නිවේදන පාඨමාලාව
උපන් දින මෙම අවස්ථාවට ඩානා සේවා හා ඔබේ පවුලේ අය හා මිතුරන් සියලු නැකැත් අවස්ථා ලෙස සියලු භික්ෂු කිරීමට පාතරාසය / ආහාර පරිත්යාග
14, කාලිදාසයන් Raod, ගාන්ධිනගර්හි, Bengaluru 560009 ඉන්දියාව
දුරකථන: 09731635108, 0943158020
දහම් සේවයේ වසර 60 කට සැමරීමේ
මහා බෝධි, BENGALURU දියමන්ති ජුබිලි
බෝධි සර් පාගොඩ
මහා බෝධි, BENGALURU
ආනන්ද හිමියෝ පින්තූරයට.
බෝධි ගේ පින්තුරය පාගොඩ 2016-4: 27 පෞද්
Published ජුනි 14, 2016 දින
නව භාවනා පාගොඩ බෝධි ගේ පින්තුරය POGADA පැමිණීම සමාරම්භක සඳහා සූදානම් කීපයේ තුළ සිදු කර ඇත.
පැගෝඩා මහාබෝධි Dhammaduta විහාර Narasipura, Bengaluru ජූනි 2016 26 වන ඉරිදා උදෑසන 10 ට දී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.
Tipitaka ශුද්ධ ධාතු මුදුන්පමුනුවා තිබීම ලස්සන වීඩියෝ හුවමාරු. මෙම වැඩසටහන අතිපූජ්ය 95 උප්පැන්න වන සංවත්සරය මෙම අවස්ථාවට පවත්වන ලදී. Acharya බුද්ධරක්ඛිත bada Bhanteji 2016 මාර්තු මාසයේ දී ධම්මපද උළෙල තුළ.
අපි සුහදව 2016 ජූනි මස 26 වැනි දින මෙම ඓතිහාසික අවස්ථාවට සහභාගි වීම ඔබ සහ ඔබේ මිතුරන් ආරාධනා කරනවා.
මහා බෝධි සංගමය, Bengaluru.INDIA
මහාබෝධි Dhammaduta විහාර Narasipura ගම, Bengaluru උතුරේ
ඔබ සැමට මිතුරන් හා පවුලේ සාමාජිකයින් සමඟ ඔබට ආරාධනා
යන සුබ වැඩසටහන සහභාගී වීම සඳහා
ශුද්ධ කුඩ ක Awakenement හා
පැගෝඩා වල මුදුනේ දියමන්ති ගොබ
ජුනි මස 2016 26 වන ඉරිදා
මහාබෝධි Dhammaduta විහාර
ගමේ: Narasipura Matthahalli P.O
Alur පාර, Dasanapura Hobli,
Bengaluru උතුරු -562123, ඉන්දියාව
මහාබෝධි සංවිධාන නිර්මාතෘ
සතියක් පුරා පට්ඨාන ධර්මදේශනාව
18-25 ජූනි 2016
ජනාධිපති, භික්ෂු සහ සියලු සාමාජිකයන්
ශුද්ධ කුඩ හා දියමන්ති ගොබ ක Awakenement
මෙම Budhi ගේ පින්තුරය පාගොඩ මුදුනේ
අතිපූජ්ය භික්ෂු විසින්
පූජ්ය. Sayadaw Nandhobhasalankara, Ubhatovibhangadhara
Ven.Sayadaw ෂව් එසමනම Thar Thitala, Dvipitakadhara
පූජ්ය. Sayadaw Obhasabhivamsa, Pathamakyaw Tha-sa-ඒ Dhammacariya
පූජ්ය. Sayadaw Vepullalankara, Dvipitakadhara Paliparagu
පූජ්ය. Sayadaw Nyanadhaj, Paliparagu
පූජ්ය. Sayadaw Maghinda, Vinayadhara
පූජ්ය. SayadawNyanadhaja, Dhammacariya
ගිහි බැතිමතුන් විසින් සංඝ දිවා ආහාරය පූජාවක්
බෝධි ගේ පින්තුරය පාගොඩ හා බෝධි PRAKARA
Ven.Achan Dtun (Thiracitto), තායිලන්තය
Ms මොනිකා Thaddey
ජනාධිපති මහාබෝධි මෙත්තා පදනම, ස්විට්සර්ලන්තය
මහා බෝධි Bengaluru පහත සඳහන් භික්ෂු
සහ එහි ශාඛා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වනු ඇත
ගුරු හා බාලදක්ෂිකා, මහාබෝධි ආරාම ආයතන, Bengaluru (එම්එම්අයි)
Ven.Bhikkhu Janinda, ගුරු, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu Ariyawamsa, ගුරු, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu විජය, ගුරු, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu Pamokkha, ගුරු, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu Panyarakkhita, සභාපති, මහා බෝධි Arunachal ශාඛා
Ven.Bhikkhu Panyaloka, අධ්යක්ෂ, මහාබෝධි Namsai ශාඛාව
Ven.Bhikkhu ධම්මාලෝක, අධ්යක්ෂ, මහාබෝධි මයිසූර් ශාඛාව
Ven.Bhikkhu Sangharakkhita, භාණ්ඩාගාරික MBS
Ven.Bhikkhu Buddhadatta, විදුහල්පති, මහාබෝධි ආරාම ආයතනය
Ven.Bhikkhu Vishudananda, අධ්යක්ෂ, මහාබෝධි Chichingehera ශාඛාව
Ven.Bhikkhu Nyanarakkhita, අධ්යක්ෂ, මහාබෝධි Suknachari ශාඛාව,
Ven.Bhikkhu Buddhapala, අධ්යක්ෂ, මහාබෝධි හයිද්රාබාද් ශාඛා
Ven.Bhikkhu Nyanapala, සහකාර. අධ්යක්ෂ, මහාබෝධි Tawang ශාඛාව
Ven.Bhikkhu අස්සජි, අධ්යක්ෂ, මහාබෝධි Deomali ශාඛාව
Ven.Bhikkhu Sanghadatta, අධිකාරී, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu සුනන්ද, ගුරු, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu Dhammadipa, ගුරු, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu Dhammajyoti, ගුරු, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu Sanghavansa, ගුරු, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu Dhammagaveso, Asst.Superintendent, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu Ratthapala, ගුරු, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu Dhammankur, මහාබෝධි විද්යාලය, Chichingehera
Ven.Sayale Yasanandi, විදුහල්පති, මහාබෝධි Gotami ශාසනය, Bordumsa
Ven.Sayale Uttamanyani, ගුරු, එම්එම්අයි
Ven.Bhikkhu Tejapanyo, නව Zeland
Ms.Marianne ඇඟිලි, ස්විට්සර්ලන්තය
ඩර් Maur, ස්විට්සර්ලන්තය යුමිකෝ Mr.Alex
Mr.Kurt Nyaya Haverkamp, ​​ස්විට්සර්ලන්තය
Ms.Michtild Saddha Jecker, ස්විට්සර්ලන්තය
Ms.Gaby Schweizer, ස්විට්සර්ලන්තය
Ms.Helen වොන් උණට, ස්විට්සර්ලන්තය
Ms.Barbara Thaddey, ස්විට්සර්ලන්තය
මිස් Suwaree Jenjirawantana, තායිලන්තය
මිස් නාරා Pipatcharoenkij, තායිලන්තය
Mrs.Duangchai Phasomsup, තායිලන්තය
මිස් Atcharin Vitheethum, තායිලන්තය
Mr Soe Hlaing, මියන්මාරය
Ms Wint බ්රහස් බ්රහස් අවුන්, මියන්මාරය
Mr අවුන් වින් oo, මියන්මාරය
Ms Myint Myint Ohn, මියන්මාරය
Mr Nyunt වයි, මියන්මාරය
Ms ස්රධාන ස්රධාන සූ කී, මියන්මාරය
Mr වයි අමාත්යාංශය Htet, මියන්මාරය
බෝධි ගේ පින්තුරය Pagada ඉදිකිරීම් කණ්ඩායම්
සංකල්පය හා ක්රම සම්පාදන:
Ven.Bhikkhu ආනන්ද, Gen.Secretary, MBS
Ven.Bhikkhu Sangharakkhita, Dhammaduta විහාරය, Bengaluru
චිත්ර ශිල්පියා සහ සැලසුම්: Dr.C.Chandrasekhara
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා: ශ්රී මාධව් Rohidekar
ඉදිකිරීම්: ශ්රී A.Rajanna
පාගොඩ ඉංජිනේරු හා Builder: මහතා Nyunt වින්, මියන්මාරය
බුද්ධ ප්රතිමා හා bada හිමියෝ ප්රතිමාව: Pushparaj එම්
ගල් වැඩ: ජුලියස්සහ Jagannath
මූර්ති: Krishnappa, මයිසූර්
වානේ වැඩ: අරුල්
බෝධි Prakara නිර්මාණ: ඉෂාර සහ සහකරු ශ්රී ලංකා
උපදෙස්: පූජ්ය. භික්ෂු සුබෝධි, Mahameswanava අසපුව ශ්රී ලංකා
හරි, භාවනා ප්රතිලාභ දුසිම් ගනනක් ඇති බව ඔබ දන්නා නිසා,
සියලුදෙනා එය කරන්නේ. ඔබ සමඟ අමුත්තන් හෝ පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා බලන්න
පොත් සාප්පුවක් ඇත්නම්, එසේ කිරීමෙන් විවිධ ක්රම ගොඩක් තියෙනවා කියලා බලන්න
භාවනා, භාවනා ක්රම දුසිම් ගනනක්, සමහර එකිනෙකට ගැටෙන
විස්තර. ඔබ සඳහා හොඳම වන ආකාරය කල්පනා.
ඔබ වාඩිවී විවිධ භාවිතයන් මුහුදු සැරිසැරීමට උපකාරී වනු ඇත
භාවනා, කෙටියෙන් ඔවුන් එක් එක් පැහැදිලි, සහ තවදුරටත් පෙන්වා දෙමින්
සම්පත්. දහස් ගනනක් නොවේ නම් - - වර්ග සිය ගණනක් වචනාර්ථයෙන් ඇත
භාවනා, ඒ නිසා මෙහි මම වඩාත්ම ජනප්රිය අය පමණක් ගවේෂණය කරනු ඇත.
ඔබ ද වඩාත් ගතික භාවනා ක්රම සඳහා, මගේ ඇවිදීම භාවනා මඟ පෙන්වීමක් පරීක්ෂා කර ගත හැක. හෝ, ඔබ මේ වන විටත් භාවනා සමග සමහර අත්දැකීම් නම්, ඔබ භාවනා පර්යේෂණ මෙම පශ්චාත් ලිවීමේදී මම කරන ගැන කියවීම භුක්ති විය හැකිය.
“හොඳම” භාවනා ඔබ ජීවිතයේ මෙම අදියරේ දී, ඔබ වෙනුවෙන් ක්රියා කරන මෙම භාවනා වේ.
සාමාන්යයෙන් ඔවුන්, අවධානය යොමු ඇතුළු වන මාර්ගය මත පදනම් භාවනා වර්ගීකරණය
කාණ්ඩ දෙකක් යොමු අවධානය හා විවෘත නිරීක්ෂණය. මම කැමතියි
තුන්වන මා යෝජනා කරනවා: වෙහෙසකර සාධක.
අවධානය යොමු අවධානය භාවනා
මුළු භාවනා සැසිවාර අතරතුර තනි වස්තුවක් මත අවධානය යොමු.
මෙම වස්තුව හුස්ම, එය මන්ත්රය, නිරූපණය කිරීම්, කොටසක් විය හැක
ශරීරය, බාහිර වස්තුව, ආදී වෘත්තිකයෙකු ණය, තම හැකියාව පරිදි
තෝරාගත් වස්තුව ශක්තිමත් ලැබෙන දී අවධානය ගලා තබා, සහ
අවධානය වෙනතකට යොමු අඩු පොදු සහ කෙටි ආයු කාලයක් බවට පත් වේ. දෙකම ගැඹුර හා
ඔහුගේ අවධානය steadiness සංවර්ධනය කර ඇත.
වේ: සමථ (බෞද්ධ භාවනා), Zazen සමහර ආකෘති පත්ර, ආදරණීය කරුණාව
විවෘත අධීක්ෂණ භාවනා
ඕනෑම එකක් වස්තුවක් මත අවධානය යොමුවී ඇති, අපි විවෘත එය තබා,
විනිශ්චය තොරව, අපේ අත්දැකීම සියලු අංශ අධීක්ෂණය හෝ
ඇමුණුමක්. සියලු අවරණය, ඔවුන් අභ්යන්තර (සිතුවිලි, හැඟීම් විය යුතු අතර,
මතකය, ආදිය) හෝ බාහිර (ශබ්ද, සුවඳ, ආදිය), පිළිගත් හා දක්නට ලැබේ
ඔවුන් කුමක් සඳහා. එය of-ප්රතික්රියාශීලී නොවන අධීක්ෂණ කිරීමේ ක්රියාවලිය වන
ඔවුන් තුළට යන්නේ නැතිව මොහොත මොහොතේ සිට අත්දැකීම් අන්තර්ගතය,.
නිදසුන් නම්: අනිත්ය භාවනා විපස්සනා භාවනාව, මෙන්ම සමහර වර්ග
Taoist භාවනා ය.
අවධානය විශේෂයෙන් කිසිම දෙයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර නැත එහිදී රාජ්ය,
නමුත් ම මත reposes - නිහඬව, හිස් ස්ථාවර හා introverted. අපිට පුළුවන්
ද “Choiceless දැනුවත් කිරීමේ” හෝ “මේවායෙහි” එය ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ මෙම රාජ්ය කතා සොයා භාවනාව මිල කැඳවීම් බොහෝ.
නැහැ භාවනා, සියලු වර්ගවල පිටුපස සැබෑ අරමුණ ඇත්තටම වන අතර,
ම භාවනාව වර්ගය. සියලු සාම්ප්රදායික ක්රම
භාවනා අවධානය වස්තුව, සහ පවා මෙම ක්රියාවලිය බව හඳුනා
නියාමනය, මනස පුහුණු කිරීම සඳහා පමණක් මාධ්යයක් වන අතර, වෙහෙසකින් ඒ නිසා
අභ්යන්තර නිශ්ශබ්දතාව හා විඥානය ගැඹුරු රාජ්යයන් සොයා ගත හැක.
අවසානයේ අවධානය වස්තුව හා ක්රියාවලිය ම දෙකම ඉතිරි
පිටුපස, එහි එකම ලෙස, වෘත්තිකයෙකු සැබෑ ස්වයං ඉතිරි
1) ෙබෞද්ධ භාවනා
සෙන් භාවනා (Zazen)
සම්භවය සහ අර්ථය
Zazen (坐禅) මාර්ගයෙන්
ජපන් “වාඩිවී සෙන්”, හෝ “ඉඳගෙන භාවනා”,. එය එහි මුල් බැස ඇත
චීන සෙන් බුද්ධාගම (Ch’an) සම්ප්රදාය, ඉන්දීය භික්ෂුවක් ආපසු සොයා දීම
ආයුෂ්මත්වරුන්ට උපසම්පදාව (6 වන සියවස ක්රි.ව.) බටහිර, එහි වඩාත්ම ජනප්රිය ආකාර එන දී
Dogen Zenji (1200 ~ 1253), ජපානයේ සෝටෝ සෙන් ව්යාපාරයේ නිර්මාතෘ සිට.
සමාන පිළියම් යෙදිය ජපානය හා කොරියාව, සෙන් යන Rinzai පාසල් අනුගමනය කෙරේ.
එය සාමාන්යයෙන් එගොඩ කකුල් සමග, කලාල සහ කුෂන් කට බිම මත ඉඳගෙන සිදු කරයි. එපමණක්ද නොව එය නෙළුම් හෝ අර්ධ නෙළුම් තත්ත්වය සිදු කරන ලදී, නමුත් මේ සිටින්නේ අවශ්ය වේ. අද කාලයේ බොහෝ වෘත්තිකයන් මේ වගේ වාඩි:
භාවනා වර්ග - Zazen ඉරියව්
භාවනා වර්ග - zazen පුටුවක්
සෙන් කඳු අසපුව රූප අනුග්රහය
අති වැදගත් අංශයක්, ඔබ පින්තූර බලන්න ලෙස, ආපසු තබා ඇත
සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලින්ම pelvis සිට ගෙල. මුඛය ආසන්නව තබා
සහ ඇස් ඔබේ අයැදීම් දෙවියන් ගැන බිම මත රැඳෙන සමග, පහත හෙලන තබා ඇත
ඔබ ඉදිරියේ අඩි දෙකක් හෝ තුනක්.
එය මනස අංගයක් ලෙස, එය සාමාන්යයෙන් ක්රම දෙකක් අනුගමනය කරනවා:
හුස්ම කෙරෙහි අවධානය යොමු -
හා එළියට යනවා හුස්ම ව්යාපාරය ඔබගේ සියලු අවධානය යොමු
නාසය හරහා. මෙම ඔබේ හුස්ම ගණන් ආධාර ලබන කල හැක
මනස. ඔබ ආශ්වාස එක් එක් කාල 10 සමඟ ආරම්භ, එක් ගණන ගණන්, සහ
පසුව පසුගාමී ඔබ 1 පැමිණෙන විට, ඔබ නැවත ආරම්භ ආදිය, 9, 8,7දක්වා ගමන් කරමින්
නැවත 10 සිට. ඔබ උමතු ලබා ගැනීමට හා ඔබේ ගණන් නැති නම්, මෘදු ගෙන
10 අවධානය සහාය හා එහි සිට නැවත ආරම්භ.
Shikantaza ( “පමණක්
වාඩි “) - මෙම ආකෘති පත්රය තුළ වෘත්තිකයෙකු කිසිදු නිශ්චිත භාවිතා නොකරන
භාවනා වස්තුවක්; ඒ වෙනුවට, වෘත්තිකයින් හැකි තරම් පවතිනු
වත්මන් මොහොත තුළ, දැනුවත් හා ඔවුන්ගේ හරහා දේ නිරීක්ෂණය
විශේෂයෙන් දෙයක් මත ජීවත් තොරව මනස හා ඔවුන් වටා.
එය වෙහෙසකර පැවතීම භාවනා වර්ගයක් තියෙන්නේ
එය මට ද?
ඉතා සන්සුන් භාවනාව ශෛලිය වන අතර, ඔබ පහසුවෙන් ගොඩක් සොයා ගත හැකි
එය ක්රියාවට ශක්තිමත් ප්රජාව මෙන්ම, මත බොහෝ තොරතුරු
අන්තර්ජාලය. අයිතිය ඉරියව් අනුව අවධානය යොමු විශාල ප්රමාණයක් ඇත,
සාන්ද්රණය සඳහා ආධාර ලෙස. එය සාමාන්යයෙන් සෙන් බෞද්ධ ජනතාවත් ඇත
මධ්යස්ථාන (සංඝ), ශක්තිමත් ප්රජා සහයෝගය ඇතිව.
ඔවුන් ඔබ එය බෞද්ධ දර්ශනයේ අනෙකුත් මූලද්රව්ය සමඟ හවුල් කරගත්තාම, සොයා වනු ඇත:
, උතුම්ද ritualism ටිකක්, හඬ නගමින් හා පිරිසක් කියවීම්
බුද්ධ ඉගැන්වීම්. සමහර අය අන් අය නෑ, මේ කැමති වනු ඇත. පෞද්ගලිකව මම
වසර3ක් සඳහා බෞද්ධ පිරිස zazen ප්රගුණ, සහ එම බව මට සොයා
මූලද්රව්ය හා විධිමත් ටිකක් ද සඳහා ව්ය q හයක් සකස් හැකි
මෙම භාවිතාව, තමන් තුළ ඔවුන් ද භාවනා වේ.
භාවනා වර්ග - විපස්සනා
“විපස්සනා” බව පාලි වචනය
“විදර්ශනාව”, හෝ “පැහැදිලි පෙනීම” වේ. එය සාම්ප්රදායික බෞද්ධ
ප්රායෝගිකව, නැවත ක්රි.පූ6වන ශත වර්ෂයේ දිවෙන. විපස්සනා-භාවනා, ඉගැන්වූ ලෙස
පසුගිය දශක කිහිපය තුළ, ථේරවාද බෞද්ධ සම්ප්රදාය පැමිණෙන්නේ,
සහ එස් එන් ගොඑන්කා තුමා සහ විපස්සනා ව්යාපාරය විසින් ජනප්රිය කරන ලදී.
විපස්සනා-භාවනා ජනප්රියත්වය, එම “අනිත්ය කිරීමට
හුස්ම සිහිය “” ලෙස බටහිර තවදුරටත් ජනප්රිය වී ඇත “.
[විපස්සනා පුහුණු කරන ආකාරය මත යම් එකිනෙකට ගැටෙන තොරතුරු පවතී. තුළ
පොදු, කෙසේ වෙතත්, වඩාත් ගුරුවරුන් අනිත්ය සමඟ ආරම්භ අවධාරණය
මනස ස්ථාවර කිරීමට හා “ප්රවේශ දිනාගත් ප්රථම අදියර මගින් හුස්ම
සාන්ද්රණය. “මෙම වැඩි අවධානයක් යොමු අවධානය භාවනා වගේ. එවිට
පරිචය වී තිබුණේ, ශාරීරික මත වර්ධනය වන “පැහැදිලි අවබෝධයක්” සම්බන්ධයෙන් පෙලඹෙන්නේ
එනම් හා මානසික සංසිද්ධිය, මොහොතක් විසින් මොහොතේ ඔවුන් නිරීක්ෂණය නොව
ඕනෑම උපාදානය. මෙන්න ආරම්භක සඳහා ඉලක්ක කර ගත් හඳුන්වාදීම, යනවා. දක්වා
දැන මා තවත් සපයා ඇති සම්බන්ධතාවය පහත සඳහන් හෝ ඉගෙන යෝජනා කරයි කියලා
ගුරුවරයා (සමහර විට විපස්සනා පාදයට).]
ඉතා මැනවින්, එක් වාඩි වේ
ඔබගේ කොඳු ඇට පෙළ සකානමය සමග බිම කුෂන්, හරස් කකුල්;
විකල්පයක් ලෙස, පුටුවක් භාවිතා කල හැක, නමුත් ආපසු නො විය යුතු
සහාය දුන්නේ ය.
පළමු අංගය සමථ භාවිතය හරහා, සාන්ද්රණය වර්ධනය කිරීම ය. මෙම සාමාන්යයෙන් හුස්ම දැනුවත් කිරීම මගින් සිදු කරනු ලැබේ.
ඔබගේ සියලු අවධානය, මොහොතේ සිට මොහොතේ, ඔබේ ව්යාපාරය පිළිබඳ
හුස්ම. උදරය යන ව්යාපාරයේ සියුම් එනම් බලන්න
ඉහළ නගින අතර පහත වැටෙන. විකල්පයක් ලෙස, එක් කිරීම ආනාපාන පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ හැකි
ගුවන් පුඩු හරහා ගමන් සහ ඉහල තොල් සම ස්පර්ශ -
නමුත් මෙම ටිකක් වැඩි ප්රායෝගික අවශ්ය, හා තව තවත් දියුණු වේ.
ඔබ හුස්ම පිළිබඳ අවධානය යොමු, ඔබට වෙනත් අවරණය දක්නට ලැබෙනු ඇත හා
එනම් පෙනී දිගටම: ශබ්ද, ශරීරය තුළ හැඟීම්, හැඟීම්
ආදිය ඔවුන් ක්ෂේත්රය තුළ මතු ලෙස සරලව මෙම සංසිද්ධිය නිරීක්ෂණය
දැනුවත් කිරීමේ, පසුව හුස්ම ආනාපාන වෙත ආපසු යන්න. අවධානය
මේ අතර මෙකී, සාන්ද්රණය වස්තුව (හුස්ම ගැනීම) තබා ඇත
වෙනත් සිතුවිලි හෝ එනම් හුදෙක් “පසුබිම් ශබ්දයක්” ලෙස වේ.
මෙම භාවිතාව (උදාහරණයක් වන ව්යාපාරයේ අවධානය යොමු වන බව වස්තුවක්
උදරය) මේ “ප්රාථමික වස්තුවක්” ලෙස ද හඳුන්වනු ලැබේ. හා “ද්විතීයික වස්තුව”
සංජානනය පිළිබඳ ඔබේ ක්ෂේත්රයේ පැන නගින වෙන කිසිම දෙයක් වේ - එක්කෝ
සිහිකල්පනාව ඇතිව පහ (ශබ්ද, ගඳ සුවඳ, ශරීරයේ ඇති itchiness, ආදිය) හරහා හෝ
මනස (චින්තනය, ස්මරණය, හැඟීමක්, ආදිය) හරහා. ද්විතියික වස්තුව නම්
ඔබේ අවධානය හක්ක සහ එය ඉවතට අදින, හෝ එය ආශාව හේතු හෝ නම්
පෙනී සංස්කෘතියේ හරක්, ඔබ සඳහා වන ද්විතීයික වස්තුවක් පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතුය
මොහොතක් හෝ දෙකක්, “කල්පනා” වැනි මානසික සටහනක් සමග එය නම්කොට,
“මතකය”, “නඩු විභාගය”, “ඉසව්වේ”. මේ ක්රියාව බොහෝවිට හැඳින්වෙන්නේ
මානසික සටහන් පොදුවේ වස්තුවක් හඳුනා නමුත්
සවිස්තරාත්මකව. නැත්නම්, ඔබ සතුව ශබ්ද දැන සිටින විට, උදාහරණයක් ලෙස, “නඩු විභාගය” එය ලේබලයක්
“යතුරු පැදි,” “හඬ” හෝ “ඕලූ බල්ලා.” අප්රසන්න නම් වෙනුවට
ආනාපාන, මතු වෙනුවට “දණහිස වේදනාව” හෝ “මගේ” වේදනාව “හෝ” හැඟීමක් “කරුණාවෙන්
ආපසු වේදනාව. “එවිට මූලික භාවනා ඔබේ අවධානය නැවත
වස්තුවක්. මානසික සටහනක් සඳහා “සුවඳ” වූ විට සුවඳ දැන, කියන්න
මොහොතක් හෝ දෙකක්. ඔබ සුවඳ හඳුනා ගැනීමට නැත.
මේ අනුව “ප්රවේශ සාන්ද්රණය” ලබාගත්, අවධානය පසුව හැරී ඇත
පිළිවෙත් වස්තුව, සාමාන්යයෙන් කල්පනා කරන විට හෝ ශාරීරික එනම් වන. එක
සිතුවිලි ඉඩ, ඇමුණුමක් නොමැතිව දැනුවත් වස්තූන් නිරීක්ෂණය
හා සංවේදනය පැන පලා ඔවුන්ගේ කැමැත්තෙන් ම සමත්. මානසික ලේබල්
(ඉහත විස්තර කෙරේ) බොහෝ විට වීම ඔබ වැළැක්වීම සඳහා ක්රමයක් ලෙස භාවිතා වේ
සිතුවිලි විසින් ගසාගෙන, සහ මැරුණොත් වඩා වෛෂයික ඔබ තබා
එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස එක් නිරීක්ෂණය කළ බව දුටු පැහැදිලි වර්ධනය
සංසිද්ධිය “පැවැත්මේ ලකුණු” තිදෙනෙකු විසින් පැතිර ඇත. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, පැවරුවේ, සාමය හා අභ්යන්තර නිදහස මෙම යෙදවුම් සම්බන්ධයෙන් දියුණු කරන ලදී.
වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න:
විපස්සනා වර්ග (Anh-මිං දෝ සිට පිළිතුර කියවා)
විපස්සනා Dhura (ඉතා ගැඹුරු ලිපිය)
ආරම්භක සඳහා විපස්සනා (ගොඑන්කා තුමා ශෛලිය)
තැනිතලාව ඉංග්රීසි, මාරාවේශය (නිදහස් සඟරාව ඉලෙක්ට්රොනික පොත් ලෙස අවපතනය)
ඔබ අසල ඇති විපස්සනා මධ්යස්ථානයට පිවිසෙන්න
ඔබ ඔබේ ශරීරය තුල ඔබ බිම් උදව් කිරීමට විශිෂ්ට භාවනා වන අතර,
හා ඔබගේ මනස වැඩ ආකාරය ක්රියාවලිය තේරුම්. එය ඉතා ජනප්රිය
භාවනා ශෛලිය. ඔබ ගුරුවරුන්, වෙබ් අඩවි, සහ තරම් සොයා ගත හැකි
ඒ ගැන පොත්, මෙන්ම3~ 10 දින පලායාම් (පරිත්යාග අනුව). එම
එය ඉගැන්වීමේ සෑම විටම නොමිලේ. කිසිදු විධිමත් හෝ පුද පූජා ඇත
මෙම භාවිතාව අනුයුක්ත.
ඔබ භාවනා සම්පූර්ණයෙන්ම අළුත් නම්, විපස්සනා හෝ අනිත්ය සමහර විට ඔබ ආරම්භ කිරීමට සඳහා හොඳ මාර්ග වේ.
භාවනා, සම්ප්රදායික බෞද්ධ භාවනා සිට ආශ්රයෙන් අනුවර්තනය කර ඇත
පරිචයන්, විශේෂයෙන් විපස්සනා, පමණක් නොව, දැඩි බලපෑමක් ඇති
වෙනත් වූවකි (එවැනි Thich නත් Hanh සිට වියට්නාම් සෙන් බුදු දහම වැනි) ඒ අතර වේ. “අනිත්ය” බෞද්ධ කාලීන සති සඳහා පොදු බටහිර පරිවර්තනයකි. Anapanasati,
“හුස්ම ගැනීමේ අනිත්ය”, බෞද්ධ පිළිවෙත් කොටසක්
විපස්සනා හෝ අන්තර්ඥානය සඳහා භාවනා, සහ අනෙකුත් බෞද්ධ භාවනා
පරිචයන්, එවැනි zazen ලෙස (මූලාශ්රය: විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය).
බටහිර, මාරාවේශය සඳහා ප්රධාන බලපෑම්කරුවන් එක් ජෝන් Kabat-Zinn වේ. ඔහුගේ මාරාවේශය-Based මානසික ආතතිය අඩු කිරීම වැඩසටහන
(MBSR) - ඔහු මැසචුසෙට් විශ්ව විද්යාලයේ 1979 දී වර්ධනය වූ
වෛද්ය විද්යාලය - රෝහල් කිහිපයක හා සෞඛ්ය සායන භාවිතා කර ඇත
භාවනා හිතාමතාම වර්තමාන වෙත අවධානය යොමු යොදාගන්නවා
මොහොතක් පිළිගැනීමට, සහ-judgmentally නොවන වෙත අවධානය යොමු
එනම්, අදහස්, හා පැන හැඟීම්.
භාවිතයන් ‘කාලය, සමග, මහලේ කුෂන් මත, හෝ පුටුවේ වාඩි
කෙළින්ම හා සහාය නොදක්වන නැවත. ව්යාපාරය කිරීම සඳහා විශේෂ අවධානයක්
ඔබේ හුස්ම. ඔබට හුස්ම, ඔබ ආශ්වාස කරන බව දැනුවත් විය කරන විට, සහ
එය කෙසේ දැනෙනවා. ඔබට හුස්ම පිට කරන විට, ඔබ පිටතට හුස්ම ඇත දැනුවත් විය. කරන්න
නිරන්තරයෙන් ඔබේ භාවනා පිළිවෙත් දිග සඳහා මෙම වැනි
හුස්ම ගැනීමට අවධානය යොමුකිරීම. හෝ ඔබ ගෙවිය යුතු වෙත ගමන් කළ හැක
පැනනඟින එනම්, සිතුවිලි සහ හැඟීම් කෙරෙහි අවධානය.
උත්සාහයක් හිතාමතාම අපගේ වර්තමාන මොහොතේ යමක් එකතු කරන්න වන්නේ ද නැත
අත්දැකීම්, නමුත් අහිමි තොරව, සිද්ධ වෙන දේවල් දැන සිටිය යුතුයි
අප නැගෙන ඕනෑම දෙයක්.
ඔබේ මනස වෙනතකට යොමු වනු ඇත
ශබ්ද, එනම්, හා සිතුවිලි සමඟ ගමන් බවට. සෑම මොහොතකම, ඒ
සිදු, මෘදු ඔබ අවධානය වෙනතකට යොමු කර ඇති බව හඳුනා, හා ගෙන
අවධානය නැවත හුස්ම ගැනීමට හෝ එම අරමුණ ඇරිය කිරීමට
කල්පනා හෝ ආනාපාන. සිතිවිල්ලකින් / sensation තුල වීම, හා සරලව එය පැමිණ එපවත් දැන අතර විවිධ ලොකු නැහැ.
ඔබේ භාවිතය සහ භුක්ති විඳීමට ඉගෙන ගන්න. ඔබ කළ පසු, ශරීරය හා මනස හැඟෙන්නේ විවිධ අගය කරනවා.
අතර: අපේ දෛනික කටයුතු තුළ අධර්ම යොදාගන්නවා
, ආහාර ගැනීම, ගමන්, කතා. “දිනපතා ජීවිතය” මෙනෙහි කිරීම සඳහා, එම ක්රියාවලිය
විය, වත්මන් මොහොතේ සිද්ධ වෙන දේවල් කෙරෙහි අවධානය යොමු වේ
“ස්වයංක්රීය ආකාරය” ජීවත් නැහැ - වෙච්ච දේ දැන. ඔබ නම්
, කතා කරන්න, අදහස් ඔබ කතා කරන වචන අවධානය යොමු බව ආකාරය
ඔබ ඔවුන් කතා කරන, සහ සිටීම සහ අවධානය සමග සවන්. එසේ නම්, ඔබට
ඔබේ ශරීරය ව්යාපාර පිළිබඳ වඩා පරීක්ෂාකාරී වීම යනු,, ඇවිදින විට, ඔබේ පාද
බිම, ඔබට ඇසෙන ශබ්ද, ආදිය ස්පර්ශ
වාඩිවී ප්රායෝගිකව ඔබේ උත්සාහය ඔබේ දෛනික ජීවිතයේ ක්රියා, අනෙක් අතටත් සඳහා සහය දක්වයි. ඔවුන් දෙදෙනාම එක හා සමානව වැදගත් වේ.
සාමාන්ය ජනතාව, මෙම සමහර විට ලබා ගැනීමට වඩාත් යෝග්ය වන ක්රමයක් වන
භාවනා කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. මෙය බොහෝ බව භාවනා වර්ගය
පාසල් හා hos උගන්වා
pitals ලෙස මා දන්නා පරිදි. එම
“සිහිය ව්යාපාරය” නිදැල්ලේ සමාජය තුළ අද කාලයේ භාවිතා වන, වන
බුදු දහම නොව, ඔවුන්ගේ නිසා බෞද්ධ පිළිවෙත් ධජයෙන්
හොඳ ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්ය හා යහ සෞඛ්යය ප්රතිලාභ.
බොහෝ මිනිසුන්, මාරාවේශය භාවනා භාවනා එකම වර්ගය විය හැක
ඔවුන් කැමති ඔවුන්ගේ අවධානය පමණක්, භෞතික, විශේෂයෙන්ම නම් වන අතර
භාවනා මානසික ප්රතිලාභ, එය සාමාන්යයෙන් උගන්වන්නේ ලෙස සිට හොඳින් විඝටනය
බව සාම්ප්රදායික නැගෙනහිර සංකල්ප හා දර්ශන කිහිපයක්
මෙම භාවිතාව එක්ව සිටියහ. ඒ සඳහා එය විශාල වේ - එය ඔබගේ ජීවිතයට හොඳ දේවල් ගෙන ඇත.
ඔබගේ අවධානය ගැඹුරු පරිවර්තනය හා අධ්යාත්මික සංවර්ධනය වන අතර,
කෙසේ වෙතත්, පසුව සතිපට්ඨාන භාවනා සඳහා පමණක් මූලික පියවරක් විය හැකිය
ඔබ. මෙහිදී ඔබට පසුව විපස්සනා, Zazen, හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ගමන් කළ හැකි
ප්රේම කරුණාව භාවනා (මෙත්තා භාවනා)
කරුණාව, තබන්නේ, සහ හොඳ හිත අදහස් කරන්නේ පාලි වචනය. මෙය
ප්රායෝගිකව බෞද්ධ සම්ප්රදායයන්, විශේෂයෙන් ථෙරවාදී පැමිණෙන්නේ
හා ටිබෙට් වූවකි. “දයානුකම්පාව භාවනා” සමකාලීන වේ
පෙන්නුම් කරන්නේ, විද්යාත්මක ක්ෂේත්රයේ
මෛත්රිය භාවනාව සහ ඒ හා අදාළ භාවනා පුරුදු ශක්තිය පෙන්වීමට.
ප්රතිලාභ ඇතුළත්: සමග empathize කිරීමට ඉහල දැමීම එක් හැකියාව
අන් අය; ඇතුළු කරුණාව මගින් ධනාත්මක හැඟීම් සංවර්ධනය,
දුරු වීම යනු, තවත් වැඩි ආදරණීය ආකල්පය; වැඩි ස්වයං-පිළිගැනීම;
කෙනෙකුගේ ජීවිතය ගැන ප්රවීණතා වැඩි හැඟීමක්; හා වැඩි හැඟීමක්
ජීවිතයේ අරමුණ (අපගේ අනෙකුත් පශ්චාත් තව තවත් කියවීමට).
ඇස් වසා, භාවනා තත්ත්වයකට හිඳින, හා උත්පාදනය
කරුණාව සහ තබන්නේ ඔහුගේ මනස සහ හදවත හැඟීම්. මගින් ආරම්භ
ක්රම ක්රමයෙන් දෙසට නම්, ඔබ දෙසට කරුණාව සංවර්ධනය
අන් අය හා සියලු සතුන්ට. සාමාන්යයෙන් මෙම ප්රගමනයක් උපදෙස් දෙනු ලැබේ:
දුරු වීම යනු,
එය “මධ්යස්ථ” පුද්ගලයා
සමානව ඉහත හතර
පසුව ක්රමයෙන් මුළු විශ්වයම
සංවර්ධනය කිරීමට දැනෙන්නේ සතුට ක්ෂණිව සඳහා යහපැවැත්මේ බව ය
සෑම. මේ ක්රියාව නිශ්චිත වචන හෝ වාක්ය හදුන්වන්නේ විසින් ආධාර කළ හැකි
බව නිරූපණය කිරීම, මෙම “අසීමිත උණුසුම් මන්දෝත්සාහී හැඟීමක්” එතනින් නතර
අන් අය දුක් සහ ආදරය යැවීම, හෝ රාජ්ය සිතා විසින්
තවත් වීම, ඔහු සතුට හා සාමය ප්රාර්ථනා කළේය.
වැඩි වැඩියෙන් ඔබ මෙම භාවනා, ඔබ අත්දකිනු ඇත තව තවත් ප්රීතිය අදහනවා. ඒ Mathieu රිචඩ් ගේ සතුට රහසක් නොවේ.
තබන්නේ විසින් සිතේ විමුක්තිය සඳහා නිසි ෙණන එක,
unarisen රෝගාතුර කැමැත්ත අවස්තාව නැති අතර මතුව රෝගාතුර කැමැත්ත අත්හරිනු ලැබේ. “- බුදුන් වහන්සේ
මෙම ලිපිය දී, එමා Seppälä, ආචාර්ය උපාධිය නිම කරන ප්රේමණීය කරුණාව භාවනා විද්යාත්මකව ඔප්පු ප්රතිලාභ 18 ක්ෂේත්රයකි.
ඔබ සමහර විට වඩාත් දුෂ්කර ඔබ හෝ අන් අය මත? හෝ ඔබට අවශ්ය වගේ දැනෙනවා
ඔබේ සබඳතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා? ප්රේමය භාවනා ඔබට උපකාරී වනු ඇත.
එය අන් අය ගැන සිතනවා නම් සහ ස්වයං-කේන්ද්ර ජනතාව සඳහා දෙකම ප්රයෝජනවත් වන අතර, එය
සතුට ඔබගේ සාමාන්ය මට්ටම වැඩි උපකාරී වනු ඇත. ඔබ දැනෙන්නේ නැහැ
දී කරුණාව හා මානසික අවපීඩනය (හෝ වෙනත් ඕනෑම සෘණ හැඟීම)
එය ද බොහෝ විට නින්ද නොයාම, නපුරු සිහින දැකීම, හෝ කෝපය ගැටළු නාශකයක් ලෙසද බෞද්ධ ගුරුවරුන්, විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
paricāraṇā - සේවා, අවධානය බලා; සතුටක්, තෑගිබෝග හුවමාරු, තෘප්තිය
- සමාජ අරලියගහ
බැංගලෝර් හෝ Bengalore කන්නඩ කේත රචනය තුල (අකුරු)
පූජ්ය Acharaya බුද්ධරක්ඛිත මහා නාහිමියන්
බුද්ධ වටිනා ඉගැන්වීම් ක්රියාත්මක කිරීමට සේවා වැඩසටහන.
මහා බෝධි විහාරය, බැංගලෝර්
වැනි පණිවිඩය සමග ඇත. සමාජය, බෞද්ධ භික්ෂූන් සහ මෙහෙණින් සඳහා ආරාම, රෝහල්, භාවනා මධ්යස්ථාන,
අධ්යාපනික ආයතන ලොව පුරා මිනිසුන් දහස් ගණනක් පහසුකර දහම් පොත් සියයකට අධික
ස්ථාපිත කර ප්රකාශයට පත් කොට ඇත.
මහා බෝධි සංගමය 2006 දී එහි ස්වර්ණ ජයන්තියට සමරනු හා සේවා 50 වැනි වසරේ
සැමරුම් තුළ, සමාජය පාලි හා ථෙරවාද බුදු දහම බුදු රජාණන් වහන්සේ විශ්ව
විද්යාලය ලෙස උසස් කරනු ලබන පාලි හා බෞද්ධ අධ්යයන සඳහා මහාබෝධි ඇකඩමි ආරම්භ
තවත් පිම්මක් ගෙන ඇත.
මහා බෝධි සංගමය බැංගලෝර් ඉතිහාසය
21-05-2010 දින පැවති මහා බෝධි සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමකදී මෙම අවස්ථාවට bada හිමියෝ පූජ්ය Acharya බුද්ධරක්ඛිත කතාව
ඉන්දියානු බෞද්ධ අනුගාමිකයන් ගොඩක් ජීවත් හිමාලයානු ප්රදේශ ගසා කති. පූජ්ය Dhammapala බුදුන් වහන්සේගේ රූප කෙලෙසා විරෝධය පළ බැවින්, ඔහු දරුණු ලෙස හිංසා පීඩා ඇති Mahant වන goondas විසින් විය.
ජීවිතය කැප කළා. ඔහු බෞද්ධ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන කරලා බුද්ධාගම යළි ඇති කිරීමට අවශ්ය විය. ඔහු ශ්රීමත් Ashutosh Mukharjee වැනි බෙංගාලය, සර් Manmatha බැනර්ජි,
ශ්රී ශ්යාමා ප්රසාද් මුකර්ජි, ආදිය ඉතා කීර්තිමත් නායකයන් සහභාගී වූ අතර
ක්රියාකාරීව අනගාරික උදව් එහිදී ව්යාපාරය ආරම්භ කරන ලදී.
පූජනීය ස්ථාන තුළ වන්දනා මධ්යස්ථාන ක්රියාත්මක කිරීමට ඔවුන්ට පුහුණු කළා. පූජ්ය අනගාරික Dhammapala ඇති උද්යෝගයෙන් වෙඩි මේ තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා, වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කළා. එහෙත් ඔවුන් බුදු දහම ඉන්දියාවේ වර්ධනය විය හැකිය හා නියම විදිහට තම මුල්
පදිංචි ඉඩම්, ඉන්දියාවේ බුදු දහම නවෝදයක් ඒ නිසා, ඉන්දීය සන්දර්භය තුළ
බුද්ධ ධර්මය පැතිරවීම ගැන කිසිම අදහසක් තිබුණෙ නැහැ.
කොළඹ දී යළි ආරම්භ ජර්මනිය හා අන් අය. බෞද්ධ පිළිවෙත් අධ්යාපනය අවසන් කිරීමෙන් පසු මම Pativisodhaka ලෙස Tipitaka කතුවැකිය වැඩ සහභාගි බුරුමයේ රජය විසින් ආරාධනා කරන ලදී.
ඇත මිස, සත්ය නොවූ පවතිනු ඇත. විවිධ බෞද්ධ රටවල භික්ෂූන් වහන්සේලා අවංක වූ නමුත් ඔවුන්ගේ කටයුතු විවිධ රටවල් වලින් ලැබෙන විදේශ වන්දනා කළමනාකරණය සීමා කරන ලදී. සමහර භික්ෂූන් වහන්සේලා ඇතැම් විශ්ව විද්යාල තුල ඉන්දීය දර්ශනවාදය කොටසක් ලෙස බුදු දහම ගුරුවරුන් බවට පත් විය. මෙම සියලු කටයුතු බුදු දහම පුනර්ජීවනය කිරීමේ අවස්ථාවේ සිට නොවන ඵලදායී විය. ඔවුන් විලවුන් බලපෑමක්, හා නොගැඹුරු හා කල් විය.
නොවන බව තත්ත්වය සමග කැමති වුණා. අපේ ස්වාධීන සමාජයක් වනු ඇත, ජනාධිපති ලෙස මම නිලධාරී හා sadhana වැඩසටහන් මගින් ප්රායෝගික ආකාරයට කටයුතු සිදු කරනු ඇත. ඇය වඩා සතුටු වූ අතර මම ජූනි 19565වන දින බැංගලෝර් පැමිණි ආකාරය වේ.
දැමීම මගින් ආරම්භ කර, ඉඩම් සාරවත් කිරීමට Ragi සිටුවීමට ආරම්භ කරන ලදී. ඒ නිසා පළමු වසර කිහිපය, එය එම වෙබ් අඩවිය හා ගොඩනැගිලි වැඩ සංවර්ධනය විය.
කිරීමට සුදුසු වනු ඇත. brevity වෙනුවෙන් 54 වසර6Navakas, වසර නවය කාල බෙදී ඇත.
බව පවසා සිත්තම් කර විවාදයක් නැත. මම එම අභියෝගය පිළිගෙන අපි වර්තමාන බෝධිය අසල විවාදයට. අවසානයේ දී ඔවුන් එහි කියවන දේ බොරු වූ අතර ඔවුන් මා අපහසුතාවයකට ගැන දුක බව අවබෝධ කරගෙන සිටියා.
මෙම බුද්ධිමතුන් කිහිප දෙනෙකු සමග මම ඉරිදා දේශනයක් වැඩසටහන, අර්ධ පැය භාවනාව, හා දහම් ඉගැන්වීම් ආරම්භ කරන ලදී. පසුව ඔවුන් හරහා අන් අය ගොඩක් සම්බන්ධ වූ අතර මෙම වැඩසටහන එතැන් සිට අඛණ්ඩව කටයුතු කරයි. එක් දින වික්ටෝරියා රෝහල වෙත පැමිණෙන මම වෛද්යවරයා බලා පිළිකා රෝගීන් විශාල සංඛ්යාවක් විය. ඔවුන් වේදනාවෙන් වූහ. ඒ නිසා මම නිලධාරී වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළ අතර රෝහලේ ඩානා සේවා ලෙස ය.
සඳහා කටයුතු කළා. පලතුරු බෙදා දෙන ලදී අපි රෝගීන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඇතිව ඉක්මන් සුවය ප්රාර්ථනා. ද වෛද්යවරයා ඊළඟ සේවා සඳහා මුදල් පොරොන්දු වුණා.
sadhana වැඩසටහනේ කොටසක් බවට පත් විය. මෙම අනෙකුත් සේවාවන් වැසෙමින් ආකාරය වේ. දැන් රෝහලේ දානය සේවා ඉතා ජනප්රිය විය. මුලින්ම එය මසකට වරක්, එසේ නම් එක් වරක් 15 දින තුළ, එසේ නම් සතියකට වරක් එවකට සෑම දිනකම බවට පත් වූ අතර.
බැතිමතා උපකාරයෙන් බලපත්රයක් වී රිය පැදවීම ආරම්භ කරන ලදී. මෙම රෝහල සේවා හොඳින් සංවිධානය බවට පත් විය. අපි ශ්රී ලංකාවේ සිට පසුව ඇස් දන්දීමේ වැඩසටහන එක් කරන ලදී, ලාදුරු රෝගියා සේවය වැනි විශේෂ සේවා රැගෙන පිළිකා රෝගීන්ට සේවය ආදිය. මෙම සේවා සහභාගී වූ අතර අරමුදල් කිසිදු හිඟයක් ඇති විය ජනතාවගේ පුළුල්, ගොඩක් ව්යාප්ත විය.
මේ අතර, ප්රධාන ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහල වැඩ අවසන් කරන ලදී විට, අප පළමු මහලේ ගත්තා. ඒ නිසා ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති ද සාර්ථකව හා මිනිසුන් ගොඩක් පැවිදි පුහුණු වැඩ සටහන සඳහා එක් විය.
තවත් වැදගත් උදාහරණයක් සඳහන් කළ හැක. Mr.Nijalingappa ඔහු ප්රධාන අමාත්ය වූ අතර සමීප බැතිමතා බවට පත් විය. ඔහු අසනීප විය රෝහල් විය. ඔහු අපේ රෝහලේ දානය සේවා දුටු අපි රෝහලට ඔහු හමු වී ඇත. එය සමහර කර්මාන්ත ඔහුගේ කර්මාන්තය සඳහා බලපත්රයක් ලබා ගැනීම සඳහා මෝටර් රථයක් ඔහු අල්ලස් ගැනීමට අවශ්ය බව පෙනේ. ඔහු, පිරිසිදු අතින් දේශපාලනඥයකු, ඔහු පොලිස් වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කරන මිනිසා තර්ජනය කලේ ය. බය, ඒ මනුෂ්යයා සමාව ඉල්ලා සිටියා. Mr.Nijalingappa ඔහු මහා බෝධි සංගමය විසින් පවත්වන රෝහලේ දානය දීම සඳහා ඒ කාර් ඉවතට දෙන්නේ ඔහුට කමා කරනු ලැබේ බව මේ මිනිසා පැවසීය. පළමු රථ හතරක් MBS පැමිණි ආකාරය වේ.
කිරීමට ඉදිරිපත් විය. 1 වන සහායක මහා බෝධි වැඩසටහන් අවසන් වන විට තම මත පුළුල්. මුදල්, පැමිණි ජනතාව පැමිණ දේවල් නෙවෙයි.
2 වන සහායක අපි පිළිස්සීම රෝගීන් ගැන අවධානය යොමු කියලා. කර්නාටක ප්රාන්තයේ කිසිදු පිළිස්සීම රෝහලේ ඇති විය. බර්න්ස් රෝගීන් වික්ටෝරියා රෝහලේ varanda තබා ඇති අතර ඔවුන් මිය යන්න ඉඩ දෙන්න හැර කිසිවක් සිදු කළ හැක. එය හානිකර තත්ත්වය විය. ඒ නිසා මහාබෝධි වූ බර්න්ස් රෝහල් ව්යාපෘතිය කිරීම් ප්රවර්ධනය කරන ලදී. අපි කාර්මික අනතුරක් ගොදුරු තොර සේවා ඉදිරිපත් වැනි විවිධ කර්මාන්තකරුවන් පරිත්යාග කරන ලදී. අපි පසුව 200 ක් beded රෝහලේ බවට පත් වූ ඇඳන් 50 ක් සමග ආරම්භ කරන ලදී. එය මහා බෝධි Burn ගණන්වල සහ හදිසි අනතුරු මධ්යස්ථානය ලෙස නම් විය. මේ ක්රියාමාර්ගය මත පසුව තවදුරටත් දීර්ඝ කරන ලදී. අපි දිස්ත්රික්කයේ රෝහල් කිහිපයක, මයිසූර්, Mandya තුළ, වැනි හසන්, Tumkur, Chikmagalur රජයේ රෝහල්වල Burn ගේ වාට්ටු ඉදි කළේය. එය වඩාත් තෘප්තිමත් සේවා වැඩසටහන බවට පත් විය. පිළිස්සුම් වැඩ බොහෝ ජනතාව සඳහා බියකරු එකක් වූ නිසා මහාබෝධි ද medico-සමාජ-කම්කරුවන් බොහෝ පුහුණු කළා.
කරන අපේ රෝහලේ ආරම්භ කියලා. අපි සංස්ථාව ළඟට Lalbagh පිටුපස 99 වසරේ බදු පදනම මත ඉඩම් තියෙනවා. අපි ආරෝග්යා පදනම, ඉන්දියාව, එල්ලය රෝහල සහ වෛද්ය මධ්යස්ථාන ක්රියාත්මක කිරීමට ය වෙනත් සංවිධානයක් ආරම්භ කරන ලදී. ඒ වගේම අපි2වන හා3වන සහායක කාලය තුළ වසර 15 ක් තිස්සේ නිදහස් අත්පා
පරිත්යාග, කෘත්රිම අත් පා නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කරන ලදී.
ය. දැන් පාසල් මහාබෝධි ආදර්ශ විද්යාලය බවට පත් විය තිබේ. එය ප්රධාන වැඩසටහන වෙත සංවර්ධනය කර ඇත.
pinjarapole සතුන් පෝෂණය වැනි පවත්වන ලදී ආදිය පුහුණුවක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අපි Sakalavara මෙම වැඩසටහන දීර්ඝ කරන ලදී.
3 වන සහායක 1974-83 ආරම්භයේ දී, අපි සෞඛ්ය ප්රඥාවන්ත ආපස්සට මුහුණ දුන්නා. වෛද්යවරුන් හෘද ප්රශ්නය හඳුනා. ඒ නිසා වෙහෙසකාරී ක්රියාකාරකම් සීමා කිරීමට සිදු විය. කටයුතු, යහතින් මත යද්දී අපි අපේ ප්රකාශන අංශය සංවිධානය හා පොත් හරිම සතුටුයි නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන ලදී.3වන අවසන් වන විට පොත් සහායක විශාල සංඛ්යාවක් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.
4 වන සහායක තුළ මා ජපාන හා එක්සත් ජනපද සංචාරයක නිරත විය. මම කැලිෆෝනියා හා බැංගලෝර් අතර ෂටලය කිරීම සඳහා යොදා ගනී. එහිදී අපි විවිධ ආයතන ඉගැන්වීම් වැඩසටහන ගෙන තිබේ. බිග් බෙයාර් දී භාවනා මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කරන ලදී Buddhayoga භාවනා මධ්යස්ථානය නමින්.
1984 දී4වන සහායක තුළ අපි බැංගලෝර් මහාබෝධි විශ්ව මෛත්රී ස්ථූපය ඉදි කළේය. එය අවාසනාවන්ත හේතු බුද්ධාගම ප්රතික්ෂේප සඳහා ගිය වසර 1000 පසු ඉන්දියාවට ඉදි කරන ලද පළමු ස්ථූපය වේ. ආදිය මහායාන, Tantrayana, Vajrayana, වගේ, බුදු දහම බොහෝ නිකායන් ඇවිත් බෞද්ධ ප්රජාව දක්වා කඩා දුර්වල විය. මුල් ඉගැන්වීම් ශ්රී ලංකාව, බුරුමය හා තායිලන්තය තුළ ආරක්ෂා කරන ලදී. නමුත්, ඉන්දියාව තුළ මුල් ඉගැන්වීම් කිසිම සලකුණක් 1000 කට ආසන්න කාලයක් සිට සොයා ගෙන ඇත.
කළා. අපි වෙළුම් 13 ඉදිරිපත්. දැන් මේ පොත් මුද්රණය නොකෙරේ වන අතර අපි ඔවුන්ට ෙමෙසේ ප්රකාශයට පත් කිරීමට නැවත සංස්කරණය කර ඇත. තවදුරටත් වෙළුම් ද පරිවර්තනය කරනු ඇත.
ලදාක් කලාපයේ කාර්ගිල් ඵලදායී වනු ඇත අපට පවසයි. ඔවුන් ටිබෙට් පද්ධතිය ගියහ. විවෘත මනසක් වීම, Ladakhis අපගේ මධ්යස්ථානයක් පවත්වා ගෙන යනු ලබන භාවනා පලායාම් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන් සඳහා ලදාක් කලාපයේ කාර්ගිල් ගිය විදේශිකයන් දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.
රටවල් වෙත ගෙන ගොස් ඔහු උපකාර ගොඩක් ලබා ගැනීමට හැකි විය. ඒ කොරියානු කන්යා සොහොයුරියක් මහාබෝධි කරුණා පුන්යාධාර රෝහලේ නමින් රෝහලේ පරිත්යාග කරන ලදී. තායිවාන සංවිධානයක් FO Kuang ශාන් ද සැලකිය යුතු ආකාරයකින් උදව් කළා. පසු, ඇතැම් බුරුම Mahatheras පැමිණ ඔහුට උදව් කළා. ඒ නිසා ඔහු දැන් ඵලදායී මධ්යස්ථානය ක්රියාත්මක වේ. අපි ඉතා ඕනෑකමින් ඔහු ලදාක් කලාපයේ කාර්ගිල් බෞද්ධ සංස්කෘතික සංරක්ෂණය
යහපතට, ලදාක් කලාපයේ කාර්ගිල් ථෙරවාද බුදු දහම ලෙස හඳුන්වන බුදු මුල්
ඉගැන්වීම් ප්රචාරය අපගේ අති පූජනීය කාර්ය ඉටු කරන බවට ප්රාර්ථනා කරමි.
ශාන් විශ්වවිද්යාලයේ සිට පිළිගන්නා ලදී. මහායාන ඔවුන්ගේ වර්ගය චීන දාර්ශනික පිළිවෙත් හා විශ්වාසයන් හා පිරිහෙන වසර තුළ ඔවුන් ඉන්දියාවේ සිට ලැබී ඇති දේ සමඟ මිශ්ර කරන ලදී. ඒ නිසා එය අපට සැලකිය යුතු අත්දැකීමක් වුණා. 1991-92 දී සහායක වන4ක කාලය තුල, අපි බරපතල හෘද ප්රශ්නයක් දුක් හා එක්සත් ජනපදයේ හදවත් සැත්කමක්.
ආරම්භ කර ඇත. මෙම Sevakshetra ද අපගේ ක්රියාකාරකම් සඳහා වැඩි තිරසාර සහයෝගය ගෙන ඒමට දීර්ඝ කරන ලදී.
ආයතනය ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත. ටියුශන් පන්ති සංවිධානය කර ඇති අතර, පෙළ පොත් නිෂ්පාදනය කර ඇත. අභියෝගාත්මක කාර්යයක් එම අවස්ථාවේ දී ගුරුවරුන් මෙන්ම ශිෂ්යයන් පුහුණු කිරීම සඳහා වී ඇත. මහා බෝධි නාලන්දා නේවාසිකාගාර ඉඩකඩ භෝජන ශාලාවක් සහ මුළුතැන්ගෙයි සමග 90 භික්ෂූන් අනුගතවීමට ඉදි කරන ලදී. තවත් එක් වැදගත් වැඩසටහනක් Dikkha හා Sikkha සමග pabbajja සම්බන්ධීකරණය වැඩසටහන වී ඇත. මහාබෝධි ද ඉන්දියාව පුරා ඉන්දීය බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා හත මාසික 3-Dhammaduta පාඨමාලා පවත්වන ලදී.
ගොඩනැගීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත එහිදී Deomali තවත් ශාඛා ආරම්භ කර ඇත. එක් ශාඛාවක් චි චින් Chera දී Tripura දී ආරම්භ කරන ලදී. මේ සියලු කටයුතු සභාපති ලෙස පූජ්ය කස්සප හිමියෝ විශිෂ්ට වැඩ කරන්නේ.
පූජ්ය Panyaloka Namsai දී මහාබෝධි විද්යාලයේ ව්යාපෘති අධ්යක්ෂ කාර්යාලය භාර ගැනීමට අපගේ Diyun මධ්යස්ථානය වෙත යවා ඇත. ඔහු A සිට Diyun කාර්යාලයේදි සමග ඉසෙඩ් කිරීම සඳහා, මහා බෝධි බැංගලෝර් වෙනුවෙන් මෙම මධ්යස්ථානය සංවිධානය කර ස්ථාපිත කිරීමට ඇත. ඔහු සඳහන් කළ පරිදි මෙම ව්යාපෘති වල ප්රගතිය ගැන එදා සහ අද වාර්තා යැවීම තබා ඇත.
නාමයෙන් ඉතා ප්රණීත පරිත්යාග ලබා දී ඇත වයස අවුරුදු ගෙදර. දැන් ඇය සහ ඇගේ මිතුරන් බැංගලෝර් හා Kathina Civara ඩානා දී Pavarana
උත්සවයේ සහ මහාබෝධි සමාගම Dhammavijaya බුද්ධ විහාරය සහ 2010 ඔක්තෝබර්
මාසයේ දී Diyun දී මහාබෝධි මෛත්රී සෑයේ විවෘත කිරීමේ උත්සවයට මත එනවා.
මෙම කාලය තුළ ග්රන්ථ කිහිපයක් ඉංග්රීසි, කන්නඩ, ඇසමීස් සහ බෙංගාලි, ප්රකාශයට පත් කරන ලදී පෙළ පොත් සහ වෙනත් අය දෙකම. සමාජය මෙහි ප්රකාශයට පත් හා තායිවානයේ බුද්ධ අධ්යාපන පදනම ආයතනික ශරීරය ලැබෙන දෙකම පොත් ලක්ෂ හයක් බෙදා දෙන ලදී.
සන්ඩේ දේශන උනන්දුවෙන් බැතිමතුන් සහ භාවනාවේ සැලකිය යුතු ප්රේක්ෂක සමග මේ අවුරුදු සඳහා බාධාවකින් තොරව අඛන්ඩව ඉදිරියට ගොස් තිබේ.
පාලි හා බෞද්ධ අධ්යයනය සඳහා මහාබෝධි ඇකඩමි, ස්ථාපිත විය. හින්දි අනුවාදය ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භ කරනු ඇත. මධ්යම රජයේ ඉදිකිරීම් සිට ආධාර ඇකඩමි වැඩසටහන් සඳහා වෙන්නේ සමඟ. මෙම පාලි හා ථෙරවාද බුදු දහම බුදු රජාණන් වහන්සේ විශ්ව විද්යාලය ලෙස සංවර්ධනය කරනවා.
පදනම Alur දී සදාචාරාත්මක හා ආත්මික අධ්යාපනය සඳහා මහාබෝධි Dhammaduta මධ්යස්ථානය සඳහා තැන්පත් කර ඇත. අක්කර 3.75 Dhammadutas සඳහා පුහුණු මධ්යස්ථානයක්, Dhammacaris ලෙස
භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා සංවර්ධනය හා භාවනා පුහුණුවට ද ගිහි ජනතාවගේ කරනු
ලබන Upasaka Chaitanya බුද්ධගයාවට (Raghunath) විසින් පරිත්යාග කරන ලදී.
නවතම එකට මුළු ඉදිරිපිට සංයෝගයක් බිත්ති, Upasaka Rajanna බුද්ධගයාවට
ඓතිහාසික දායකත්වය නැවත ඉදිකිරීම සමග, ලස්සන මහාබෝධි Dhammavijaya
මීට අමතරව ඉන්දියාව සහ විදේශගත මහා බෝධි බැංගලෝර් ශාඛා සංඛ්යාව වැඩි
ධාවනය කිරීමට හැකි විය, අපේ ආරාම ආයතනයේ පුහුණුව ලබන අනෙකුත් බලාපොරොත්තු
සහගත ඉදිරි භික්ෂූන් වහන්සේලා කිහිප වේ.
එදිනෙදා සහ වීක්ලි වැඩසටහන්:
5.30 ට a.m. උදෑසන සහ භාවනාවෙනි
6 p.m. සවස කීමෙන් සහ භාවනාවෙනි
සෑම ඉරිදා දහම් කතිකාව සහ භාවනා වැඩසටහන 9.30 a.m. දී
3.30p.m. සෑම සෙනසුරාදා අභිධම්ම පන්තිය
පූර්ණ චන්ද්රයා දිනවල රෝහල් ඩානා සේවා
මැයි පූර්ණ චන්ද්රයා දින බුද්ධ ජයන්ති උළෙල ජනපති
ජූනි මස පුර පසළොස්වක දිනයේ Ven.Dhammapala දිනය (අනගාරික Dhammapala පිලිබඳ මතකය)
ජූලි මස පුර පසළොස්වක දිනයේ Dhammacakka Pavattana දිනය
ඔක්තෝබර් පූර්ණ චන්ද්රයා දින Pavarana දිනය
මාර්තු මස පුර පසළොස්වක දිනයේ ධම්මපදය උළෙල
වෙනත් වැඩ සටහන්:
බුද්ධ ධර්මය සහ බුද්ධාගම පිළිබඳ දුරස්ථ ලිපි ගනුදෙනු පාඨමාලා සඳහා අයදුම්
සම්මන්ත්රණ, විවිධ අදාළ මාතෘකා මත සම්මන්ත්රණ,
ඉල්ලීම සහ ආරාධනා පත්රයේ මත මේ ආරාම වල හෝ ගිහි ජනතාවගේ නිවෙස්වලට කුසලතා
ආසියානු බෞද්ධ සමාජයක්. එම සංවිධානයේ ස්වයං-සඳහන් මුල් ප්රයත්නය ඉන්දියාවේ බුදු දහම නැවත නඟා
සිටුවීම සඳහා වූ අතර, ඒ බුද්ධගයා, සාරානාත් සහ Kushinara ඉපැරණි බෞද්ධ
සිද්ධස්ථාන නැවත ප්රතිසංස්කරණය.
සමහර ඉන්දීය බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ පහළ ගිය සියවස් ගණනාවක් පුරා සංස්කෘතික බෞද්ධ රැඳී සිටි නමුත්, ඔවුන් “බෞද්ධ” ලෙස ස්වයං-හඳුනා නැත. මහා බෝධි බෞද්ධ උනන්දුව අලුත්, සහ ලදාක් කලාපයේ කාර්ගිල් බෞද්ධ සංගමය,
සමස්ත ඇසෑම් බෞද්ධ සංගමය, සහ හිමාලයානු බෞද්ධ සංගමය නිර්මාණය වූවකි, මෙන්ම
Dalit බෞද්ධ ව්යාපාරය සඳහා පිටියේ තැබීමේ.
Kalidas MARG ගාන්ධි නගර්, බැංගලෝර්, කර්නාටක 560009
මහාබෝධි Centere Dhammaduta විහාර අපක්රමණය